All News Collection Happened in Rakhine: March 2014
ရခိုင်ပြည်တွင် သန်ခေါင်စာရင်းထဲ ဘင်္ဂလီကုလားများ၏နာမည်လိမ်ထည့်ခြင်းကို ကန့် ကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု စတင်နေပြီဖြစ်
ရခိုင်ပြည်တွင် သန်ခေါင်စာရင်းထဲ ဘင်္ဂလီကုလားများ၏နာမည်လိမ်ထည့်ခြင်းကို
ကန့် ကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု စတင်နေပြီဖြစ်သည်။လူဦးရေအင်အားအလွန်များပြာ
ဒီနေ့16 -3- 2014 ဆိုတော့ ရခိုင်ပြည်မှာ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကသန်းခေါင်စာရင်းထဲ နာမည်တွေလိမ်ထည့်မယ့်ကိစ္စကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ကန့် ကွက်ကြမယ့်နေဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဘင်္ဂလီကုလားတွေရဲ့ဘာသာရေး လူမျိုးရေး၊ယဉ်ကျေးမှူး ရန်အန္တာရာယ်အမျိုး
မျိုးကိုအနောက်ဖက်တံတိုင်းတစ်ခုလိုကာရံပြီကာကွယ်လာခဲ့တာလည်းသမိုင်းစဉ်ဆက်ပါဘဲ။တစ်နည်းအားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှူးကိုဘဲကာကွယ်ထားတယ်ထင်ရပေမယ့်လို့ မြန်မာပြည်အဖို့ 
အကျိုးကျေးဇူးတော်တော်များခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အမျိုးသားသစ္စာဖောက်အစိုးရ ဝန်ထမ်းနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကြောင့် တိုင်းပြည်ထဲသို့ လောက်ကုလားတွေဝင်လာခွင့် အခြေချနေထိုင်ခွင့် စီးပွားရေးတွေလုပ် အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့ ဘာသာရေးပွဲလမ်းကအစ ဘာမှလစ်ဟင်းမှူးမရှိရအောင် ကျနော်တို့ 
နိုင်ငံရဲ့ သစ္စာဖောက်တွေကပျူငှာ ရက်ရောခဲ့ကြပါတယ်။
အခုတော့ကုလားဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေတစ်ဝက်နီးပါးလောက်ရှိတော့မယ်လို့ တောင်ခန့် မှန်းမိပါတယ်။ဘာလို့ လဲဆိုတော့မြန်မာမိသားစု
လေးစုစာလောက်ကိုကုလားကတစ်မိသားစုတည်းနဲ့မွေးထုတ်နေတာကိုကြည့်ရင်အင်မတန်အန္တရာယ်များတာကျနော်ပြောစရာလည်းမလိုတော့
ပါ။အခုကျနော်ပြောချင်တာကတော့ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်တစ်ခုနဲ့ အဲဒီအယုတ်ကောင်ဘင်္ဂလီကုလားတွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေတာလား။ကျန်တဲ့တိုင်းရင်း
သား ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကကောအေးဆေးလား။ငြိမ်နေကြမှာလား။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရှိတယ် ဆိုပြီးတော့ ငြိမ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတစ်ခုပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ ကိုင်ထားတဲ့လက်နက် သံချေးတက်ရင်ဘဲတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီဘင်္ဂလီကုလားဖက်ကလက်နက်ကဘယ်တော့မှသံချေးတက်မယ့်
လက်နက်မဟုတ်တဲ့အပြင် လူသားအနုမြူနဲ့ ဘဲတဖြည်းဖြည်းဝါးမြို ပြီးသူတို့ 
ခန့် မှန်းရေချိန်ရောက်မှတိုင်းရင်းသားတွေကို အနိုင်ကျင့် မောင်းထုတ်လုပ်တတ်
တာသိထားသင့်တယ်။ခုချိန်ရခိုင်ပြည်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ ပြသနာတွေကိုကြည့်ရင်ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေကိုခြုံငုံသုံးသပ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ဖက်မှာတော့သူတို့ အတွက် အင်အားနဲ့ နေရာအနေအထား၊အခွင့်အရေးနဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံ အဖွဲ့ တွေရှိနေပြီဆိုပြီးစတင်လှုပ်ရှားနေပြီ။ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ လာမယ်ဆို မြန်မာပြည်ကို ကုလားလူဦးရေပေါက်ဖွားမှုနဲ့ ချိန်တွက်ကြည့်လိုက် နှစ် (၅၀)မကြာတော့ဘူး။
ဒီတော့အခုလိုအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်စေ၊တိုင်းရင်းသားချင်းဖြစ်စေစည်းစည်းလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအဝန်းကန့် ကွက်
ကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သံတစ်ခွန်းတစ်လေတောင်ဟ သံမကြားမိဘူး။ဘင်္ဂလီကုလားကိစ္စက ရခိုင်နဲ့ ဘဲဆိုင်တယ်လို့ တွက်ထားကြတာလား။မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလား။မြန်မာပြည်သားတစ်ခုလုံးနဲ့ မပတ်သတ်ဘူးလား။ဘယ်
မှာလဲတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုချင်းတွေပါဆိုတဲ့လူတွေဘာအသံမှတောင်မထွက်နိုင်ကြတော့ဘူးလား။ဒါတွေအတွက်ကျနော်တို့ ဝမ်းမနည်းပါဘူး။ရခိုင် နဲ့ ကုလားဆိုတာ တရုတ်နဲ့ ဝက်လိုအသားကျပြီးသားရန်ဖက်တွေပါဘဲ။ကျနော်ပြောလိုတာ
ကိုယ့်မြန်မာပြည်အတွက်ပါ။အခုလိုအချိန်မှာ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုတိတ်နေကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ကလည်းပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေလိုက်မယ်။
By _ Chit Thu Sky
(သတင်းအရင်းအမြစ်- Arakan News Now)
Posted by Than Htoon at 5:22 PM
Labels: ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း, ပဋိပက္ခ, ဘင်္ဂလီ, ရခိုင်, သန်းခေါင်စာရင်း
White Card ကိုင်ဆောင်ထားသူများ ပါတီထူထောင်ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲ မပေးရဟူ သောအဆိုကို အခြားပါတီအမတ်များ ၊ တိုင်းရင်းသားအမတ်များနှင့်တပ်မတော် သားကိုယ်စားလှယ်များ ထောက်ခံခဲ့ကြ
12 .3. 2014 နေပြည်တော်လွှတ်တော်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင် တင်သွင်းသော White Card ကိုင်ဆောင်ထားသူများ ပါတီထူထောင်ခွင့်နှင့်ဆန္ဒမဲမပေးရဟူသော အဆိုကို ဘူးသီးတောင်အမတ် ကုလားလှရွှေက ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ။ အခြားပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၊တိုင်းရင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်များ ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များက ထောက်ခံခဲ့ကြသောကြောင့် White Cardကိုင်ဆောင်ထားသူများ ပါတီထူထောင်ခွင့်နှင့်ဆန္ဒမဲမပေးရေးကို ဆွေနွေးရန်
လွှတ်တော် ဥက္ကဌမှ အတည်ပြုပေးလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည် ။
ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့်ရခိုင်ပြည်သူ/ မြန်မာပြည်သူများရဲ
အသံကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အသီးသီးတို့က ပြည်သူအပေါ်မှာရပ်တည်တဲ့ အပေါင်းပုံရိပ်လက္ခဏာကို သိရှိရလို့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း လွှတ်တော်သာ မှန်မှန်ကန်ကန်ရပ်တည်မှု တိုင်းရင်းသားနဲ့လူမျိုးခြားက်ို ခွဲခြားတတ်မှုပေးခဲ့ရင်လွှတ်တော်ဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစစ်အမှန်ဖြစ်လာမှာပါဟုဝမ်းသာအားရ ဖြစ်မိကြကြောင်း သိရှိရသည် ။
White Card ကိုင်တွေကို ပလပ်ဖြုတ်သင့်နေတာ ကြာနေပြီ ။ ဒေါက်တာအေးမောင်အဆိုတင်သွင်းမှုကိုလက်
ခံလိုက်ပြီးနောက်၎င်းအပေါ်မှာဆွေးနွေးအတည်ပြုရန်သာကျန်တော့ကြောင်း၎င်းကိစ္စရပ်ကိုသန်းခေါင်စာရင်း မကောက်ယူမီ ( မတ်လ ၃၀ ရက် မတိုင်မီ ) မှာအပြီးသတ်ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုသွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
Posted by Than Htoon at 3:23 PM
Labels: ပါတီ, ဘင်္ဂလီ, ရခိုင်, လွှတ်တော်
ဂွဒေသက စစ်တပ် သိမ်း မြေယာတွေ ပြန်ပေးမည်
တပ်မတော်က သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ် ကမ်းသာကမ်းခြေတစ်လျှောက်က အုန်းခြံမြေတွေနဲ့ ကျိ န္တလီမြို့နယ်ခွဲ စက်ပစ်ကွင်း မှာရှိတဲ့ မြေယာတွေကို မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ တောင် သူတွေလက်ထဲ မကြာခင် ပေးအပ်သွားမယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ လုံခြုံရေး ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း က ပြောလိုက်ပါတယ်။
မနေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ လယ်ယာမြေနဲ့ အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းမှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ နောက်ဆက်တွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာ နယ်စပ်ရေးရာ လုံခြုံရေး ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်းက အခုလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
" ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ သီးစားအကွက်စနစ်နဲ့ ထပ်မံစီစစ်ပြီးတော့ ပြန်လည်ပေးအပ် ရမယ့် မြေဧကပေါင်း ၁၅၄၈၉၂.၁၀၂ ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွကမ်းသာယာကမ်းခြေနဲ့ စက်ပစ်ကွင်း၊ သံတွဲစုန်တောဝင်း၊ ခလ ၅၅ တို့ကို ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ရမယ့်နေရာ ၄ နေရာ ပေါ်ထွက် လာပါတယ်"
ဂွမြို့နယ် ကမ်းသာယာ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်က အုန်းခြံမြေ ဧကပေါင်း ၃၀၀ ကျော်နဲ့ ကျိန္တလီမြို့နယ်ခွဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပုန်းညှက်၊ သဲကုန်း၊ စေတီကွင်း၊ ခြောက်ကုန်းရွာတစ်ဝိုက်က လယ်ယာမြေဧကပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်ကတည်းက တပ်မတော်က သိမ်းခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ဒီမြေယာတွေကို စီမံကိန်းအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး သိမ်းဆည်းခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိမှာ ဘာစီမံကိန်းမှ အကောင် အထည်ဖော်တာမရှိတာကြောင့် တောင်သူတွေလက်ထဲ ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာတပ်မတော် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရမယ့် မြေယာတွေကို တောင်သူတွေ လက်ထဲ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုလည်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်းက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ လယ်ယာမြေ နဲ့ အခြားမြေများသိမ်းဆည်းမှု စုံ စမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာမပါရှိတဲ့ မြေယာဧကပေါင်း ၅၄၀၀၀ (ငါးသောင်းလေးထောင်)ကျော်ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီး ဖြစ် သလို နောက်ထပ်မြေယာဧကပေါင်း ၁၅၀၀၀၀ (တစ်သိန်းငါးသောင်း) ကျော်ကို ဆက်လက်ပေးအပ်သွားဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 3:19 PM
မဒေးကျွန်းရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွင် ရေနံစိမ်းများ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ် လာပါက National Contingency အရဆောင်ရွက်သွားမည်
Posted by Than Htoon at 4:45 PM
လူသတ်မူ သံသယဖြင့် ဒုချီးရားတန်းရွာမှ ဘင်္ဂလီ ၈ ဦးကို တရားစွဲ
ဖမ်းဆီးထိန်းခံထားရသည့် ဘင်္ဂလီ လူမျိုး ၁၆ ဦး အထဲမှ ၈ ဦးမှာ တပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်းအား သတ်ဖြတ်ရာတွင် ကိုိယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်သူများဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ က သံသယ ရှိသဖြင့် ယခုလ ၁၁ ရက်နေ့က ရုံးတင် တရားစွဲဆိုလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
“ ဒုချီးရားတန်း ဖြစ်စဉ်နဲ့ ဆက်စပ် ဖမ်းဆီးထားတာက ၁၆ ဦးပါ။ ဒီအထဲက ၈ ဦးက တပ်ကြပ် အောင်ကျော်သိန်းကို သတ်ဖြတ်ရာမှာ ပါဝင်နိုင်သူတွေလို့ သံသယရှိတဲ့ အတွက် ဒီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရုံးတင် တရား စွဲဆိုခဲ့ပါတယ်” ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူ မောင်တော ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းတို့ (၈) ဦးမှာ ဒုချီးရားတန်တောင်ရွာမှ ရှောင်ရှင်ရှူးအာလောင် (ဘ) ဘော်ဒီ အာလောင်၊ ဒုချီးရာတန်း အလယ်ရွာမှ ဇာဟိတာလောင် (ဘ) အာလီမာမတ်၊ ဒုချီးရားတန်းတောင်ရွာမှ ရှောင်ရှူးအာလောင်(ဘ) ဒွီလာ၊ ဒုချီးရားတန်းအလယ်ရွာမှ မူစတာကာမာ (ဘ)ဘာလီဟူဆိန်း၊ ဒုချီးရားတန်အလယ်ရွာမှ ရို့မာလီ(ဘ) ဟာလူ၊ ဒုချီးရားတန်းမြောက်ရွာမှ မာမက်ရော်ဖီ(ဘ) ဇာမာလူဒိန်၊ ဒုချီးရားတန်းအလယ်ရွာမှ ဟာမက်အူဒိန်(ဘ) နေဇာအူဒိန်၊ ဒူးချီးရားတန်းအလယ်ရွာမှ ခေါ်ဘီမူလာ(ဘ) နေဇာအူဒိန် တို့ ဖြစ်ကြသည်။
“ သူတို့ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်လို သိသလဲဆိုရင် မျက်မြင် သက်သေတွေနဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေ အရ သိရတာ ဖြစ်တယ်။ အခု တရားစွဲပြီးဆိုတော့ သူတို့ကို ရုံးတင်တဲ့အခါ ပိုမို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က ရဲတပ်ကြပ်ကြီးအောင်ကျော်သိန်းဦးဆောင်သော ကင်းလှည့်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုသည် ဒုချီရားတန်း အလယ်ရွာ အရောက်တွင် ဘင်္ဂလီကျေးရွာသားများ၏ ၀ိုင်းဝန်း တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး တပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်းမှာ ယင်းအချိန်မှ စပြီး ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်။
ရဲတပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်း၏ သွေးစွန်းနေသော ယူနီဖောင်းနှင့် အဝတ်အစားများကို ၎င်းကျေးရွာမှ ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း လက်နက်နှင့် အတူ ဦးအောင်ကျော်သိန်းမှာ ယနေ့ထိ ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက တပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်းမှာ သေဆုံးသွားပြီဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။
Posted by Than Htoon at 2:43 PM
Labels: တရားစီရင်ရေး, နယ်စပ်ရေးရာ, ပဋိပက္ခ, ဘင်္ဂလီ, မူခင်းသတင်း, ရခိုင်, ရဲတပ်ဖွဲ့
မတ်လ ၁၆ ရက် စစ်တွေ ဆန္ဒပြပွဲ ပြည်နယ်ရဲမှူးကြီးခွင့်ပြု
စစ်တွေ လူထုသည် ယခုလို အမြဲညီညွှတ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဆန္ဒပြပွဲကို ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
သို့အတွက် ဆန္ဒပြပွဲကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် တစ်နာရီမှ ၃ နာရီထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲကို အကြောင်းပြပြီး ဆန္ဒပြခွင့်ကို ပယ်ချလိုက်ပြီးနောက် ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံ အယူခံတင်သွင်းရာ ၎င်းက ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းအယူခံလွှာအား ဒေါ်ကျော့စိန် (ဘ) ဦးစံထွန်းကျော်မှ ပြည်နယ်ရဲမှူးကြီးထံ တင်ပြ တောင်းခံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
၎င်းဆန္ဒပြပွဲတွင် လာမည့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအား အမည်မှန်ကို ရေးသွင်းရန်နှင့် နာမည်လိမ် ရိုဟင်ဂျာအမည်အား ရေးသွင်းခွင့် မပြုရန် တောင်းဆိုဆန္ဒပြသွားမည်ဟု စစ်တွေ ဒေသခံ ဦးလှမောင်က ပြောသည်။
Posted by Than Htoon at 2:42 PM
Labels: စစ်တွေ, ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း, ပါတီ, ရခိုင်
ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တရားပွဲ စစ်တွေတွင် လူပေါင်း ထောင်ချီတက်ရောက်နာယူ
ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တရားတော်ကို နာယူနေသော စစ်တွေ ပရိသတ် ( ဓါတ်ပုံ- Share Arakan News)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ပြုလုပ်သော မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်း နာယက ဆရာတော် အရှင် ဦးဝီရသူ၏ တရားပွဲတော်သို့ လူပေါင်းထောင်နှင့်ချီပြီး တက်ရောက် နာယူခဲ့ကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တရားပွဲအား မတ်လ ၁၁ ရက်နှင့် ၁၂ ရက်နေ့များတွင် ညနေ ၅ နာရီခွဲမှ ၁၀ နာရီထိ (၂) ကြိမ်တိတိ စစ်တွေမြို့ အတုလမာရဇိန် ပြည်လုံးချမ်းသာ ဘုရားကြီးတွင် ပြုလုပ်ရာ တရားနာသူ များပြား လွန်းသဖြင့် ဘုရားရင်ပြင်တွင် မဆန့်၍ ၀င်္ကာဘာကွင်း အပြင်ဘက် ကွင်းပြင်တွင် ပရိုဂျက်တာဖြင့် ပိတ်ကားထောင်ပြီး နာယူခဲ့ကြသည်ဟု စစ်တွေ ဒေသခံ ဦးလှမောင်က ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်အထင်တော့ လူပေါင်း သောင်းနီးပါး ရောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘုရားကြီးရင်ပြင်မှာ ပရိသတ်အပြည့် အပြင် ၀င်္ကာဘာကွင်း ပိတောက်ပင်ကနေ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ထိ၊ နောက်တစ်ခါ ဘုရားကြီးနဲ့ ကျားရုပ်ကျောင်းကြား လမ်းမကြီး အပြည့် ပရိသတ်ကို ပရိုဂျက်တာနဲ့ ပြတယ်ဆိုတော့ ကျနော်က မခန့်မှန်းတတ်ဘူး။ လူတွေက အများကြီးပါ” ဟု သူက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တရားပွဲကို စစ်တွေ လူထု ထောင်နှင့်ချီပြီး တက်ရောက်နာယူကြခြင်းမှာ ဆရာတော်၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် အမျိုးသားရေး ဆောင်ရွက်ချက် မှန်ကန်၍ ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“ ဆရာတော် ဦးဝီရသူရဲ့ အမျိုးသားရေး ဆောင်ရွက်တာဟာ မှန်ကန်လို့၊ ပီးရင်းဆရာတော်ရဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာတရားတော်ကို ကျနော်တို့က သဘောကျလို့၊ နှစ်သက်လို့၊ ကြိုက်လို့၊ ထောက်ခံလို့ တရားပွဲကို သွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဆရာတော် ဦဝီရသူ၏ တရားပွဲတွင် စစ်တွေ လူထု ကြိုက်လောက်အောင် ဘာအကြောင်းအရာများ ထူးထူးခြား ပါဝင် ပါသလဲဟု မေးမြန်းရာ ဦးလှမောင်က ယခုလို ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
“ ကျနော်တို့က ရခိုင်လူထု ကျေနပ်အောင်ဆိုတာထက် ဆရာတော်ရဲ့ တရားတော်ဟာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အမျိုးဘာသာ သာနာအကျိုး၊ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျိုး၊ လက်ရှိ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် စတဲ့ အချက်တွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့ တရားတော် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဟောကြားတဲ့ တရားဟာ အထူး တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် လက်ရှိ အချိန်တွင် အထိအချ မခံနိုင်သော အခြေအနေတွင် ရှိနေသဖြင့် ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တရားဟောပြောခြင်းဖြင့် ပဋိပက္ခကို ပိုမိုကြီးထွားအောင် လုပ်ရာ ရောက်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ဝေဖန်မူများလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။
သို့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ ပြန်ကြားရေး ဌာန အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြိုင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ သူက ယခုလို ပြောကြားသည်။
“ ဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူးခင်ဗျား။ ဆရာတော်က ဦးဝီရသူက သူဟာသူ တရားလာဟောတာဘဲ။ နှစ်ဘက်ရန်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားပွဲဘဲ။ ဘာသာရေး အရ လုပ်တဲ့ အတွက် ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။. အရင်ကလည်း ၉၆၉ ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောထိတောင် လာဟော သွားတာဘဲ။ ဘာာမှ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ တရားတော်ကြောင့် ပိုပြီးတော့တောင် ပဋိပက္ခတွေ လျော့ကျသွားနိုင်တယ်။ တည်ငြိမ်သွားနိုင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဆရာတော် ဦးဝီရသူသည် မတ် ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လယ် တစ်နာရီမှ ၃ နာရီ အချိန်ထိ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့ လောကမာရဇိန် သိမ်တော်ကြီးတွင် တရားလာရောက် ဟောကြားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်နှောင်းက ပြောသည်။
“ ဆရာတော် တရားကတော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာ တည်တံ့ရေး အတွက် ဟောတာပါ။ ဆရာတော်က အရေးကြုံရင် ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ညီညွှတ်မူတွေ ရှိရမယ်။ တစ်မျိုးသားလုံး ညီညွှတ်မူတွေ ရှိရမယ်။ အဓိက အားဖြင့် ညီညွှတ်ရေးကို ဟောတာပါ။ ကျနော်တို့ကတော့ ခုလို ဟောကြားတဲ့ အတွက် ဆရာတော်ရဲ့ တရားကို ကြိုက်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဆရာတော် ဦးဝီရသူသည် ပုဏ္ဍားကျွန်းတွင် တရားဟောပြောပြီးနောက် ညနေပိုင်းတွင် ကျောက်တော်မြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာသွားသည်ဟု သိရသည်။
Posted by Than Htoon at 2:38 PM
မောင်တောမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ခံ တစ်ဦး အသတ်ခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ခံ တစ်ဦး မတ်လ ၉ ရက်နေ့က အသတ်ခံခဲ့ရသည်ဟု အမည် မဖေါ်လိုသူ မောင်တော ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အသတ်ခံရသူမှာ မောင်တောမြို့နယ် ဘဂုံးနား (အနောက်ရွာ) ကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ခံ (မြေယာကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်) ဦးအဒူရော်ဟိန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သတ်ဖြတ်ပြီးနောက် တရားခံများသည် တစ်ဘက်နိုင်ငံ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“ သူနေထိုင်တဲ့ရွာမှာ အသတ်ခံရတာပါ။ မတ်လ ၉ ရက်နေ့ ညဉ့်မှာ ၀င်သတ်သွားတာပါ။ မနက်လင်းမှ အာဏာပိုင်တွေက သိရတာပါ”ဟု သူက ဆိုသည်။
ယင်းလူသတ်မူနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲစခန်းမှူး အမှုဖွင့်ထားကြောင်း၊ သတ်ဖြတ်သွားသူများကို ရှာဖွေ မတွေ့ရှိသေးဟု ဆိုသည်။
ယခင်ကလည်း အလာတူ မောင်တောမြို့နယ် ညောင်ချောင်းကျေးရွာ ဦးရာမောက်ဒူလာ(ခ) ဦးလှမောင် (ဘ)ဦးဖော့ရီရာမောက်သည်လည်း အသတ်ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
ယခု အသတ်ခံရသူများသည် မောင်တောမြို့နယ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဒေသအကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(မှတ်ချက်- မောင်တောမြို့နယ်တွင် မူဆလင်ကျေးရွာများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မခန့်ဘဲ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ခံ ခန့်ထားသည်ဟု သိရသည်။)
Posted by Than Htoon at 2:31 PM
Labels: ဘင်္ဂလီ, မူခင်းသတင်း, ရခိုင်, ရဲတပ်ဖွဲ့
လ၀က၀န်ကြီး မွတ်စလင် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်တွေမှာ တွေ့ဆုံ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ရခိုင်လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီကို တွေ့ရစဉ်
၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက် ခံရာမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်တဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီး အချက်အလက်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်သွင်းပေးဖို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက စစ်တွေမြို့ မွတ်စလင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ တိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံမယ့် အစီအစဉ်ဟာ ကိန်းဂဏန်းတွေကို သိရှိလိုတာကြောင့် ကောက်ခံတာဖြစ်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ မည်သို့မျှ သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းကိုလည်း ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီနေ့ တွေ့ဆုံပွဲကို စစ်တွေမြို့က မွတ်စလင်ကျေးရွာတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေက ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ၁၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီဟာ ရခိုင်လူမျိုး ရပ်မိရပ်ဖတွေ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်း သန်းခေါင်စာရင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီးခြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 2:29 PM
Labels: ဘင်္ဂလီ, ပြည်ထောင်စုအစိုးရ, ရခိုင်, သန်းခေါင်စာရင်း
သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒပြခွင့် ကျောက်ဖြူတွင်ရရှိ၊ စစ်တွေတွင် ပယ်ချခံရ
လာမည့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအား အမည်မှန်ကို ရေးသွင်းရန်နှင့် နာမည်လိမ် ရိုဟင်ဂျာအမည်အား ရေးသွင်းခွင့် မပြုရန် တောင်းဆိုမည့် ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ခုအား ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြားတွင် တပြိုင်တည်း တစ်နေ့တည်း ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေရာ ထိုဆန္ဒပြပွဲအတွက် ကျောက်ဖြူမြို့တွင်ခွင့်ပြုချက်ရပြီး စစ်တွေတွင်မူ ပယ်ချခံခဲ့ရသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
“ အမည်မှန် ဘင်္ဂလီကို ရေးသွင်းပြီး နာမည်တု ရိုဟင်ဂျာကို ရေးသွင်းခွင့် မပြုရန် တောင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကို ဒီလ ၁၁ ရက်နေ့က ကျောက်ဖြူ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဆီကို တင်ပါတယ်။ ဒီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာတော့ ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပါတယ်” ဟု ကျောက်ဖြူ ဒေသခံ ဦးထွန်းနိုင်က ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူတွင် ဆန္ဒပြရန် ခွင့်ပြုချက်ရသော်လည်း စစ်တွေတွင်မူ ပယ်ချခံခဲ့ရသည်ဟု စစ်တွေမြို့မှ လူမူရေး လူပ်ရှားနေသူ ဦးလှမောင်က ပြောသည်။
“ ကျနော်တို့က စစ်တွေမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဆီမှာ တင်ပါတယ်။ သူတို့က ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ပယ်ချတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ ရှိနေတဲ့ အတွက် ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြို့နယ် အဆင့် ပယ်ချခံလိုက်ရသဖြင့် ယခုအခါ ခွင့်ပြုချက်ရရန် ပြည်နယ် အဆင့်ထိ ထပ်မံ တင်ထားကြောင်း သူက ပြောသည်။
“ ကျနော်တို့က အဲဒီညနေမှာဘဲ ထပ်ပြီး ပြည်နယ်ကို တင်ထားပါတယ်။ ပြည်နယ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ မြို့သူမြို့သားတွေကတော့ ခွင့်ပြုချက် မရရင်လည်း ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ဆိုသည်။
လူဝင်ကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီမှ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် လာမည့် သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် တစ်စုံ တစ်ဦးက ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို ထည့်သွင်းလာပါက ရေးမှတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ရေးမှတ်သော်လည်း နိုင်ငံသားဖြစ်သည်၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲတွင် ပါဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ အစိုးရမှ တရားဝင် ကောက်ခံသော သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု ရေးမှတ်ပါက တရားဝင်သဘောမျိုးသက်ရောက်သွားနိုင်ပြီး နောင်တွင် ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်ဟု ကျောက်ဖြူ ဒေသခံ ဦးသန္တာမောင်က နိရဉ္စရာသို့ ပြောဆိုသည်။
“ လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးဌာနက ထုတ်ထားတဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ (ခ)မှာ ဘယ်လိုပါသလဲ ဆိုတော့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတစ်ခု (သို့တည်းမဟုတ်) အမည် စာရင်းမပါတဲ့ လူမျိုး တစ်မျိုး ပတ်သက်လို့ မရှိတာကို မထည့်ရလို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဖြစ်နေတာက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဘင်္ဂလီ တွေကို ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီးတော့ ထည့်ဖို့ လုပ်နေတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ဒီလို ထည့်ရင် ဒါကိုကိုင်ပြီး နောင်မှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ တောင်းဆိုလာရင် ပြသနာ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လာမည့် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် (၁၇) မြို့နယ်စလုံးတွင် လူမျိုးမှန် (ဘင်္ဂလီ) နေရာတွင် လူမျိုးလိမ် (ရိုဟင်ဂျာ) နာမည်အား သန်းခေါင်စားရင်း ကောက်ယူသည့် အခါ ရေးသွင်းမည့် အစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သန်းခေါင်စာရင်းကို မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ အထိ ကောက်ခံသွားရန် စီစဉ်သည်။ ယခုသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမူသည် နှစ်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပြီး ယခင် သန်းခေါင်စာရင်းကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ကောက်ခံခဲ့သည်။
Posted by Than Htoon at 2:28 PM
Labels: ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း, ရခိုင်, သန်းခေါင်စာရင်း
တရားမ၀င် အန်ဂျီအိုအဖွဲ့တွေ ပိတ်ပင်ရေးအဆို ရခိုင်လွှတ်တော် အတည်ပြု
မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲ ကူညီနေတဲ့ NGOs/INGOs တွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက တားဆီးပေးဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး မှတ်ပုံတင်ပြီးလုပ်ကိုင်ကြဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးထိန်လင်းက ဒီနေ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
"နိုင်ငံတော်က မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတယ်၊ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်နဲ့ လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်၊ မှတ်ပုံမတင်ပဲနဲ့လုပ်ရင် တရားမဝင်ဘူး၊ အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက် ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်မှာပဲဆိုရင် ဥပဒေလေးစားလိုက်နာမှု မဟုတ်ဖြစ်သွားပါမယ်၊ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးဟာလည်း ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရပါမယ်"
အဲ့ဒီအဆိုကို မြေပုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) က ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဝင်းက ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၇ရက်နေ့က တင်သွင်းခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးက အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် အဆိုကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဝင်ရောက်အကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၆၈ ဖွဲ့ရှိပြီး အဲဒီအထဲက နိုင်ငံတကာအဆင့် INGO အရေအတွက် ၁၅ ဖွဲ့နဲ့ NGO အရေအတွက် ၄ ဖွဲ့သာ တရားဝင်အကူအညီပေးခွင့် မှတ်ပုံတင်ရရှိထားကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၄၉ ဖွဲ့လောက်ဟာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင် မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 2:26 PM
Labels: INGO, NGO, ရခိုင်, လွှတ်တော်
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့တွင် ယနေ့ နေ့လယ် ၃ နာရီက မီးလောင်မူ ဖြစ်ပွားရာ အိမ်တစ်ဆောင် မီးထဲပါသွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
“ မီးလောင်တာက ပုဏ္ဍားကျွန်း စံပြရပ်ကွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက ၀ိုင်းပြီး အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကင်းချောင်း ရေနဲ့ ၀ိုင်းငြိ်မ်းသတ်တဲ့ အတွက် တစ်အိမ်ဘဲ ပါသွားပါတယ်။” ဟု ဒေသခံ ကိုမျိုးနိုင်က ပြောသည်။
မီးလောင်သွားသော အိမ်မှာ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့ စံပြရပ်ကွက်မှ ဦးကျော်ချေနှင့် ဒေါ်ချိုချို ပိုင်အိမ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ မိဘတွေက အပြင်မှာ အလုပ်သွားလုပ်နေချိန်မှာ ကလေး ၄ ဦးကျန်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီကလေးတွေက မီးနဲ့ ချော့ကစားရာကနေ စလောင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အနီးအနားက လူတွေ ၀ိုင်းဝန်းငြိမ်းသတ်တော့ နောက်မီးငြိမ်းသွားပါတယ်” ဟု ဆက်ဆိုသည်။
အနီးအနားမှ လူများ ကယ်တင်မူကြောင့် ကလေး (၄) ဦးစလုံးမှာ ထိခိုက်မူ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by Than Htoon at 2:24 PM
သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာ မထည့်ဘူးလို့ အစိုးရပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမရှိသလို မကြာခင် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာအမည်နဲ့ လူမျိုးစုစာရင်း ထည့်သွင်း သတ်မှတ်မှာ မဟုတ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်အရာရှိ ကြီးတစ်ဦးက ဒီကနေ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာမှာ လူမျိုးအမည် ကုဒ် နံပါတ် ၉၁၄ မှာ ရိုဟင်ဂျာအမည်နဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာ ဖြန့်ချီဖော်ပြနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းစဉ်မှာ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားသန်းခေါင်စာရင်း ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဦးမြင့်ကြိုင် က ပြောကြားခဲ့တာပါ။
"ကျနော်တို့ ကုဒ်နံပါတ်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျ၊ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ မပါတဲ့လူတွေကို ကုဒ်နံပါတ် ၉၁၄ လို့ ပေးထားတာရှိပါတယ်၊ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ မပါတဲ့လူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ"
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူတဲ့အခါ ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်တွေကို ရိုဟင်ဂျာလို့ စာရင်းသွင်းဖော်ပြမှာကို လုံးဝလက်မခံကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာအမည်သုံးစွဲခဲ့ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ ဆန္ဒပြမယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုထားပါတယ်။ ပြည်ပအခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားသူတွေကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူတဲ့အခါ ရိုဟင်ဂျာအမည်ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားသန်းခေါင်စာရင်းဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဦးမြင့်ကြိုင်ကတော့ ဒေသခံတွေအကြား စိုးရိမ်မှုရှိနေတာဟာ သတင်းအမှားတွေကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရအနေနဲ့ သတင်းအမှန်ကို ထုတ်ဖော်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူတွေကိုလည်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိမ်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း သန်းကောင်စာရင်းကောက်ယူဘို့ အခက်အခဲတွေရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ KIO အဖွဲ့က ဒီကနေ့ ပြောဆိုပါတယ်။
သန်းကောင်စာရင်းကောက်ယူမှု မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမှာ အဓိက စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ KIO အဖွဲ့က သုံးသပ်ပါတယ်။ KIO အဖွဲ့ရဲ့ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ဦးဒေါင်းခါးပြောတာကတော့ ခုလိုပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ နယ်မြေထဲမှာ စစ်ရေးအရသော်၎င်း၊ IDP Issue အရသော်၎င်း၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအရသော်၎င်း လူနေမှု အတည်တကျမရှိသေးတဲ့ အကြောင်းတွေရှိနေသေးလို့ ဒီအပေါ်ကိုအခြေခံပြီး ကျနော်တို့ နယ်မြေထဲမှာကောက်ဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းကို အဲလိုသုံးသပ်ပြီးတော့ ကောက်ချက်ချထားတာပါ"
လက်ရှိအခြေအနေမှာ သန်းခေါင်းကောင်စာရင်း ကောက်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO က မူအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သဘောမတူတာတွေရှိပေမဲ့ တရားဝင်ကန့်ကွက်တာမျိုးလည်း မလုပ်ရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကချင်လူထုအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာတော့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခုလို KIO နယ်မြေအတွင်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကချင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ လူဦးရေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ လူမူရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသား သန်းခေါင်စာရင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဦးမြင့်ကြိုင်ကို RFA အဖွဲ့သူ ဒေါ်ခင်ခင်အိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အခုလို ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်းစာရင်းကောက်ယူမယ့် အစီအစဉ်အပေါ် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ RFA အဖွဲ့သား ဦးတင်အောင်ခိုင်ရဲ့ တင်ပြချက်ကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ကြိုင်နှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို နားထောင်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
သန်းခေါင်စာရင်းအပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုကို နားထောင်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
Posted by Than Htoon at 2:18 PM
ရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ရက္ခိုင်တပ်မတော်မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
အစိုးရနန့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ “ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ညှိနိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT” အဖွဲ့ထဲ မှာ ပါဝင်တဲ့ ရက္ခိုင့် တပ်မတော်က ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်ဟာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးနိုင်ဟံသာနဲ့ အတူ မတ်လ ၇ ရက်နေ့က ထိုင်းနယ်စပ်တစ်နေရာကနေ ရန်ကုန်မြို့ကိုလေယာဉ်နဲ့ ရောက်ရှိလာပါတယ်။
သူ့တို့ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တဲ့ အခါ သူတို့ လာရောက်ရတဲ့အကြောင်းကို ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်က အခုလို စပြောပါတယ်။
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်- ကျွန်တော်တို့က အပစ်အခတ်ရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၅ ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့မှာ ကျွန်တော်က ရက္ခိုင့်တပ်မတော်က ကိုယ်စားလှယ် အနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ၉ ရက်နဲ့ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အစိုးရနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးဖို့ရှိတဲ့ အတွက် ရန်ကုန်ကို လာရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ NCCT လို့ဆိုတဲ့ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကို လာတာဖြစ်ပါတယ်။
(ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြည်သူတွေကို အသိပေးလို့ရတဲ့ အချက်တွေရှိရင် နည်းနည်း ပြောပြပေးပါ။ ဘယ်အ ချက်တွေကို အဓိက ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။)
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်- ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးဖို့တာက အချက်အလက် တစ်ချက်ချင်းစီတော့ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး လိုင်ဇာသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ သဘောတူညီချက်ကို အခြေခံတဲ့ တိုင်း ရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ရပ်တည်ချက် နိုင်ငံရေး မူဘောင်နဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ မူဘောင် တွေကို တစ်စုံတရာရောပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို အစိုးရနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိနိုင်းပြီးတော့ သဘောတူညီချက်ရအောင် ကြိုးစားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြောမယ်ဆိုရင် အရင်ကလောခီးလာ သဘောတူညီချက်ရဲ့ ဆွေးနွေးမှု ရလာဒ်က ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါတွေကို တချက်ချင်းစီ ပြောမယ်ဆိုရင် ရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာဘဲ အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ပထမ မေးတာက တိုင်းရင်းသားတွေ့ရဲ့ ကဏ္ဍပေါနေ့ာ်။ နောက်တခုက ရခိုင်ပြည်သူတွေက ALP နဲ့ AA ပေါင်းစည်းရေး ဘယ်လို ရှိနေသလဲဆိုတာကို သိပ်လိုလိုလားလား သိချင်နေကြပါတယ်။ ဒါတွေကို လည်း နည်းနည်းချပြပြောဆိုပေးပါ။)
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန် – ကျွန်တော်တို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ ALP က ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေ စုစည်းပြီး ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Join ကော်မီတီဖွဲ့ရေး အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး Join ကော်မီတီကို ဘယ်လိုဖွဲ့မလဲ။ ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ ဖွဲ့မှာ လည်းဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဘက်လုံးက စဉ်းစားနေတာရှိပါတယ်။ အဲဒီကတစ်ဆင့် ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရေးမှာ ဘာတွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာလဲ။ အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ယင်း ကျွန်တော်တို့ အပြန်အလှန် နားလည် ယုံကြည်မှုကို အခြေခံရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့တစ်ပါတီဖြစ်ရေးကို ကျွန်တော်တို့ အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းနဲ့ ကြိုးစားနေတာတွေရှိပါတယ်။
( ဟုတ်ကဲ့၊ အခုကျောက်ဖြူမှာ ကျင်းပဖို့လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း နည်းနည်း ရှင်းပြပေးပါ။)
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး- ကျော်ဟန် – ဟုတ်ကဲ့။ အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေ နေရာတစ်ခုခုမှာ ဆုံပြီး စကားပြေားကြဖို့က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ စကားပြောကြပြီး အဲဒီကထွက်လာတဲ့ ရလာဒ်ဟာ ကျွန် တော်တို့ရခိုင်ပြည်နဲ့ ရခိုင်လူမျိုးအတွက် သိပ်အရေးကြီးတဲ့ ရလာဒ်တွေဖြစ်လာမယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်အင်အားစုတွေ၊ အမျိုးသားတော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေ၊ လူမှုရေးအင်အားစုတွေ၊ တတ်သိပညာရှင်တွေ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေ ကျွန်တော်တို့ တစ်နေရာတည်းမှာစုပြီး လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ အခြေ အနေ၊ နိုင်ငံရေးရပိုင်ခွင့်၊ သယံဇာတ ရပိုင်ခွင့်၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ အစစအရာရာအားလုံးကို ဆုံပြီးတော့ ဆွေး နွေးခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အဖြေကောင်း ရလာဒ်ကောင်း တစ်ခုကို ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ တစ်မျိုးသားလုံး ကိုင်စွဲသွားမဲ့ မူဘောင်တွေလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ဖြူမှာကျင်းမယ့် ရခိုင်အ မျိုးသားညီလာခံဟာ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးအတွက် အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် ရခိုင်အမျိုးသား ညီလာခံ ဖြစ် မြောက်ဖို့အတွက် အားလုံးပါဝင်ဖို့နဲ့ အဲဒီညီလာခံမှာ ချမှတ်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးက ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။
( အခုလာတဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရခိုင်ပြည်သူတွေကို နည်းနည်း အမှာစကား ပြောကြားပေးစေချင်ပါတယ်။)
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်- ရခိုင်ပြည်သူတွေကို အမှာစကား ပြောတယ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော်တို့ သိတာလေးတွေကို အပြန်အလှန် တင်ပြပြောဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး တစ်ရပ်ကို မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ တစ်ဘက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်နေသလို ပြည်တွင်းမှာလည်း ALD နဲ့ RNDP ကလည်း ANP ဆိုပြီးတစ်ဖွဲ့တစ်ပါတီဖြစ်သွားကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အနေနဲ့လည်း လက် ရှိမှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ ALP ပါတီတို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကော်မီတီတွေ ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့တစ်ပါတီဖြစ်ရေးကို ဦးတည် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အဲဒီကနေ တခြားအဖွဲ့ငယ်တွေနဲ့လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရည်မှန်းချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုဘဲ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူတွေကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ “ အမျိုးကိုချစ် သွေးကိုစစ်” ဆိုသလို “ ချစ်လီ၊ ညီလီ စည်းလုံးလီ” ဆိုတဲ့ အဲဒီအခြေခံ သဘောတွေကို အခြေခံ ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို တစ်ယောက်ချင်း၊ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီဖြစ်သော်၎င်း ကျွန်တော်တို့ ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်သွားကြမယ်လို့ ကျွန်တော်က အဲဒီလို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
(ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်တို့ဟာ မတ်လ ၇ ရက်နေ့ကနေ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။)
Posted by Than Htoon at 2:16 PM
Labels: AA, စစ်တပ်, စစ်ရေး, ရခိုင်
မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်း အလယ်ရွာ၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား မိမိနေအိမ် မိမိဘာသာမီးရှို့သူအား ကျေးရွာရှိ မျက်မြင်သက်သေများက တွေ့ရှိသတင်းပေးခဲ့သဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်လျက်ရှိ
မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်း အလယ်ရွာတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ မိမိအိမ်ကို မိမိဘာသာမီးရှို့ခဲ့သူအား ကျေးရွာနေ မျက်မြင်သက်သေများ၏ သတင်းပေးချက်အရ သိရှိရသဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်း၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များ ထိခိုက် သေဆုံးမှု မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ယနေ့နံနက်(၁၀)နာရီကျော်ခန့်တွင် ဒုချီးရားတန်း အလယ်ရွာ၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံအငယ်တစ်လုံး၊ ဓနိမိုး၊ ထရံကာ လူနေအိမ်(၁၂)လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး နံနက်(၁၁)နာရီ (၄၅)မိနစ်ခန့်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကြောင်း၊ မီးလောင်ရခြင်းမှာ ယင်းကျေးရွာနေ ဆော်ဒီမူလာ(အသက် ၄၂ နှစ်) (ဘ)ဦးမိုက်တာက မိမိအိမ်ကို မိမိဘာသာဓာတ်ဆီဖျန်းပက်ပြီး မီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယင်းကျေးရွာနေ ဒေါ်ဟာလာမာဟာဒူ (အသက် ၆၀)နှင့် မဟာမီဒါ (အသက် ၃၀)တို့က မျက်မြင်သက်သေများအဖြစ် ထွက်ဆို ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းနေကြောင်း သတင်းရရှိလျှင် ရရှိချင်း နယ်မြေခံရဲတပ်ရင်းမှ ရဲမှူး မင်းဦး ဦးစီးအဖွဲ့၊ မောင်တောခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအုပ်သောင်းထွန်း ဦးစီးအဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ သွားရောက်ပြီး မီးငြှိမ်းသတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ မွန်းလွဲ(၂)နာရီခန့်တွင် ရဲတပ်ရင်းများကွပ်ကဲရေးမှူး၊ ဒုတိယခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရိုင်ရဲမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးမင်း၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများက သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ မျက်မြင်သက်သေ နှစ်ဦး၏ထွက်ဆိုချက် များအရလည်းကောင်း၊ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းသည့် ဆော်ဒီမူလာ၏နေအိမ်ရှိ စပါးကျီမှာ ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်း ထားသည့် အနေအထားများတွေ့ရှိရခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းသည့်အချိန်တွင် ၎င်းတို့မိသားစုမှာ မီးငြှိမ်းသတ်မှုမရှိဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့်လည်းကောင်း ရှို့မီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆရကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်မှာ “ဒုချီးရားတန်း အလယ်ကျေးရွာမှာ နေထိုင်နေတာ လက်ရှိလူဦးရေ ၄၅၀ လောက်ရှိပါတယ်။ တချို့ယောက်ျားတွေကတော့ နေ့ဘက်ရှောင်နေပြီး ညဘက်မှာ ကိုယ့်နေအိမ်ကိုယ်ပြန်လာကြတာလည်းရှိပါတယ်။ အခုဖြစ်တာက ဆော်ဒီမူလာဆိုသူက ဓာတ်ဆီထည့်ထားတဲ့ရေသန့်ဘူးကို အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝှေ့ယမ်းပက်ဖျန်းပြီး မီးစတင်ရှို့ခဲ့တယ်လို့ အဲဒီရွာက မျက်မြင်သက်သေနှစ်ဦးက ပြောပြတဲ့အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံရရှိပါတယ်။ သူတို့ကို စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဇံဖြူနဲ့ကျေးရွာစာရေး ဦးသန်းထွန်းဦးတို့ သက်သေအဖြစ်ရှိပြီး စကားပြန် အဖြစ် အိုလီ ဆိုသူက မေးမြန်းဖြေကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ဒီမူလာဆိုတဲ့သူက ရဲတပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်း ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တယ်လို့ သံသယရှိသူဖြစ်ပြီး တရားခံပြေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု မီးလောင်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအနေနဲ့ ငွေကျပ် ခြောက်သိန်းလေးသောင်းလောက် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထား ပါတယ်”ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
Posted by Than Htoon at 7:35 AM
Labels: ပဋိပက္ခ, ဘင်္ဂလီ, ရခိုင်, ရဲတပ်ဖွဲ့
ဒုချရားတန်း ရွာ ဒုတိယအကြိမ်မီးရှို့ခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်း အနောက်ရွာတွင် ယနေ့ နံနက်က မီးလောင်မူ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အိမ်ခြေ ၁၂ လုံး မီးထဲပါသွားသည်ဟု သိရသည်။
မီးကို ဘင်္ဂလီများက မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှို့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဇွန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ကလည်းမီရှို့ခဲ့သေးကြောင်းသိရသည်။
ဒုချီးရားတန်း အလယ်ရွာသည် ကင်းလှည့်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်းနှင့် သူကိုင်ဆောင်သည့် လက်နက်နှင့်အတူ ပျောက်ဆုံးနေ သောရွာဖြစ်သည်။
ဒုချရားတန်းရွာတွင် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားပြီး အပြင်လူမ၀င်စေရန်လုံခြုံရေးချထားကာ ရွာတွင် ဘင်္ဂလီများသာရှိနေသည်။
ဓါတ်ပုံ။ မတ်လ ၇ ရက်နေ့က Coral Arakan News အဖွဲ့သားများ ဒုချရားတန်းရွာသို့သွားခဲ့စဉ်က ရွာသို့ဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘဲ အနီးမှ ရခိုင်ရွာဖြစ်သည့် ကင်းချောင်းရွာမှ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကင်းချောင်းရွာသည် ၂၀၁၂ ဇွန်လ ၈ရက်နေ့က ဘင်္ဂလီကုလားများ ရွာပေါင်းများစွာ ကိုတစ်ပြိုင်နက်မီးရှို့ခဲ့စဉ်က မီးရှို့ခံခဲ့ရသောရွာဖြစ်သည်။
(ဤသတင်းအား Coral Arakan News မှကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Than Htoon at 7:32 AM
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပ
ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့အရှေ့ပိုင်း အမျိုးသမီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းကျောင်းမှာ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားကို တွေ့ရစဉ်
photo: Kyaw Zaw Win
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားတွေကို ရန်ကုန်၊ မြစ်ကြီးနားနဲ့ စစ်တွေမြို့တွေမှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက မနီလာသိန်းက ဒဂုံမြို့အရှေ့ပိုင်း အမျိုးသမီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားမှာ အခုလို ပြောပါတယ်။
"မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလည်း ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ချန်လှပ်ထားလို့မရပါဘူး၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနဲ့ အားလုံးတန်းတူညီမျှ ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကျမတို့ ဘယ်အလုပ်မဆို၊ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ထောင့်ဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်လုပ် ကျမတို့အားလုံးဟာ တူညီစွာလက်တွဲပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပေးဖို့လည်းလိုသလို၊ ရှိလာဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်"
အလားတူ အခမ်းအနားကို မြစ်ကြီးနားမြို့ ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက်က ခရစ်ယာန်ရိပ်သာမှာ ကျင်းပရာမှာ "အကြမ်းဖက်မှုကင်းစင်ဖို့ အမျိုးသမီးတို့ဘဝ မြှင့်တင်လို့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုစတင်စို့" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ဟာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သာမန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သတ္တိနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုတွေကို ထင်ဟပ်တဲ့နေ့ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အ၀ ခံစားခွင့်ရဖို့အတွက်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေဟာ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိမှ အောင်မြင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်က ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်း ရခိုင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံးက ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပခဲ့သလို ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံးက အမေရိကန် စင်တာမှာလည်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အလားတူ အပြည်ပြည်ဆိုင် အမျိုးသမီးနေ့ကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်ဒေသက မြန်မာလူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ထိုင်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက လှုပ်ရှားမှု အခမ်းအနား ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မဲဆောက်အခြေစိုက် မြန်မာလူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေနဲ့ ထိုင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့ လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရေး စာတမ်းပိုစတာတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး မဲဆောက်မြို့တွင်းကနေ မြို့ပိုင်ရုံးအထိ လမ်းလျှောက်ချီတက်လှုပ်ရှားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဲဆောက်မြို့ပိုင်ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားမှာတော့ မဲဆောက်ဒေသတွင်းက အမျိုးသမီး ၇ ဦးကို ထိုင်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနက လူမှုထူးချွန်ဆု ရွေးချယ်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုကို မယ်တော်ဆေးခန်းတာဝန်ခံ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ကိုလည်း ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသတွင်းမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ကို ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့မှာ လူမှုထူးချွန်ဆု ရွေးချယ်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းလူမှုဖွံ့ ဖြိုးရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး နိုင်ဝိချိရန်ချာဝါလစ်က ပြောပါတယ်။
အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပါဝင်လာဖို့ အရေးကြီးကြောင်း အလေးထား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန် စစ်တွေ မြစ်ကြီးနား စတဲ့မြို့တွေမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးနေ့ အခမ်းအနားတွေအကြောင်း RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ဇောဝင်း စုစည်းတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 7:25 AM
တရားမ၀င် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုအဖွဲ့တွေကို တားဆီးပေးဖို့ အဆိုတင်သွင်း
မတ်လ ၇ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို တွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လက်ရှိ လူမှုရေးအကူ အညီတွေပေးနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း INGO /NGO တွေထဲက မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့အဖွဲ့တွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် တားဆီးပေးဖို့ အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ဒီနေ့ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဝင်းက အခုလို အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာပါ။
"တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု မှတ်ပုံတင်မရရှိသေးတဲ့ INGO/NGO အဖွဲ့အစည်းများကို ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ တားဆီးကာကွယ်ပေးရန် ပြည်နယ်အစိုးရကို အဆိုတင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်"
NGO/INGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့ဟာ နှစ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြား ပြဿနာတွေ ပိုမိုကြီးထွားအောင် လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေရှိနေသလို အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာက အကြည်ညိုပျက်စေအောင် လုပ်ဆောင်နေတာတွေလည်း ရှိနေတာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြဿနာတွေ ထပ်မံမပေါ်ပေါက်စေဖို့ ဒီအဆိုကို တင်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဝင်းက ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၆၈ ဖွဲ့ရှိပြီး အဲဒီအထဲက နိုင်ငံတကာအဆင့် INGO အရေအတွက် ၁၅ ဖွဲ့နဲ့ NGO အရေအတွက် ၄ ဖွဲ့သာ တရားဝင်အကူအညီပေးခွင့် မှတ်ပုံတင်ရရှိထားကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၄၉ ဖွဲ့လောက်ဟာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင် မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဝင်း တင်သွင်းခဲ့တဲ့အဆိုကို ကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ပြီး လာမယ့် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ဒီအဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 7:21 AM
Labels: INGO, NGO, ရခိုင်, လုံခြုံရေး, လွှတ်တော်
ရခိုင်အမျိုးသား ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေး အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ဒေါက်တာအေးချမ်းနှင့် ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်တက်ရောက်
ရန်ကုန်မြို့တွင် ယနေ့ ၅ ကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်သော ရခိုင်အမျိုးသား ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေး အကြိုညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးသို့ ရခိုင်အထင်ကရ ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သော သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာအေးချမ်းနှင့် ရခိုင်လူမျိုး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူး ကြီး ကျော်ဟန်တို့က တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်အမျိုးသား ညီလာခံ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်မှ ညီလာခံဖြစ်ပေါ်လာသော အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားနေစဉ်။
ရက္ခိုင့်တပ်တော်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဦးကျော်ဟန်က ညီလာခံဖြစ်ပေါ်လာသော သမိုင်းကြောင်းများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ယခုညီလာခံတွင် ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သောမူတစ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက် ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အေးချမ်းမှလည်း အမျိုးသားညီလာခံ အရေးကြီးကြောင်းနှင့် အစ္စနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
မနက်ဖြန် ရွှေတဂုံဘုရားအနီးရှိ ရခိုင်ဓမ္မာရုံတွင် သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အေးချမ်းက "ရခိုင်သမိုင်းက ပေးသော သင်္ခန်းစာ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲတစ်ခုကို နေ့လယ် ၁၂ နာရီတွင် စတင်ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ရခိုင်ဓမ္မာရုံတွင် နံနက် ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အေးချမ်း၊ ၀ါရင့်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးဦးသာဘန်း၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်၊ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဦးကျော်ဟန်၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသော ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့် ဒေါ်ခင်စောဝေတို့က တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် ပြည်သူ (၇၀) ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံကို ရခိုင်ပြည် ကျောက်ဖြူမြို့၌ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ် ပြီး ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေး နောက်ထပ်ညှိုနှိုင်းမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Than Htoon at 7:17 AM
Labels: AA, ရခိုင်, အမျိုးသားညီလာခံ
ANP ရခိုင်အမျိုးသားပါတီသစ် တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိ
RNDP နှင့် ALD ပါတီတို့ ပူးပေါင်းပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (Arakan National Party)အဖြစ်ထူထောင်တဲ့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့စဉ်
photo: RFA/ Tun Myint
ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ပူးပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ကို ပြည်ထောင် စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင် ချပေးလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP နဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီတို့ ပူးပေါင်းထားတဲ့ ပါတီအသစ်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို မကြာခင် စစ်တွေမြို့မှာ ကျင်းပသွားမယ်လို့ အရင်က ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ဦးအေးသာအောင်က ပြောပါတယ်။
"ANP ပါတီမှတ်ပုံတင် ကျပြီးပြီဆိုတော့ စစ်တွေမှာကျင်းပမယ့် CEC အစည်းအဝေးက ပါတီရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆွေးနွေးပြီးတော့ လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်မယ်"
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ပါတီသစ်ရဲ့ ဥက္ကဌ၊ ဒုက္ကဌတွေကို ရွေးချယ်သွားဖို့ရှိသလို နှစ်ဘက်ပါတီတွေရဲ့ မြို့နယ်အသီးသီးက ရုံးခွဲတွေကိုလည်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP နဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီနှစ်ခုကိုလည်း ကော်မရှင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP နဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD တို့ ပူးပေါင်းပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP အဖြစ် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 7:15 AM
Labels: ပါတီ, ရခိုင်
OIC ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံကို လာမည်
OIC ခေါ် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ တစ်ခုသည် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ ရောက်ရှိမည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
၎င်းအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အိုင်ယက်အာမီမာဒါနီ ဦးဆောင်မည်ဟု ဘင်္ဂလာက သတင်းများတွင် ဖေါ်ပြသည်။
၄ ရက်ကြာမည့် သူတို့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၊ ပညာရေးဝန်ကြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတို့နှင့် တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားအာဏာပိုင်များက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသည်။
OIC ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ဦးဆောင်သူ အိုင်ယက်အာမီမာဒါနီသည် ဆော်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ OIC အဖွဲ့အကြီးအကဲရာထူးကို လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလက ရရှိလာသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အိုင်ယက်အာမီမာဒါနီမှာ OIC အဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ပြီးနောက် ယခုဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ခရီးစဉ်သည် ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။
Posted by Than Htoon at 3:45 PM
Labels: OIC, နယ်စပ်ရေးရာ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ပါတီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ရပြီ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (Arakan National Party) တည်ထောင်ခွင့်ကို ယမန်နေ့ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်က အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုကြောင်း ဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာအေးမောင်က ယခုကဲ့သို့ပြောသည်။
“ ဟုတ်ပါတယ်။ မနေ့က ညနေ ၃ နာရီကျော်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က RNDP ပါတီနဲ့ ALD ပါတီကို ဖျက် သိမ်းခွင့်ပြုပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုတယ်လို့ အကြောင်းကြားလာပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဖွဲ့စည်းခွင့်ကျလာသည့်အတွက် ယခင်ကထက်လုပ်စရာပိုများလာပြီး အစစ အရာရာ ဆင်ခြင်သတိထားဖို့လိုလာကြောင်းလည်း ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောသည်။
“ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ တခုတည်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဥပဒေဘောင်အထဲက သေသေချာချာ သွားဖို့လိုလာ တယ်။ အပြောအဆိုကအစ စီစစ်သုံးသပ်ဖို့လိုလာတယ်။ တစ်ခုတည်းသော အမျိုးသားပါတီကို ကျွန်တော်တို့ အဖျက်သိမ်းမခံနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ စည်းလုံးမှု ပိုလိုလာတယ်။ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ရခိုင်အမျိုး သားပါတီတစ်ခုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ လိုလာပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ခွင့်ပြုချက်ကျလာခြင်းသည် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများနှင့်လက်တွဲပြီး ရခိုင်ပြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အနာဂတ်ကို နည်းမှန်လမ်းမှန် တစ်ဆင့်ချင်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအဖြစ် ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သူကပြောသည်။
ANP ပါတီအနေနှင့် ပထမဆုံး လုပ်သင့်သည့် လုပ်ငန်းတချို့ကိုလည်း ဒေါက်တာအေးမောင်က ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ပထဆုံးလုပ်သင့်တာက နယ်တချို့မှာ RNDP-ALD ရုံးတွေရှိတယ်။ ဒါတွေကို ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီရုံးတွေဖြစ်လာအောင် အချိန်တခုသတ်မှတ်ပြီး လုပ်သင့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ANP ပါတီမှာပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ အစုအစုဖွဲ့ပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းပြီးတော့ ANPကို ပြည်သူတွေနဲ့စတင် ထိတွေ့ပေးသင့်တယ်။ ပြီးတော့ ANP ပါတီအပြင် တတိယအင်အားစု တခုကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး အားလုံးသော မြို့နယ်တခုစီ ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီဝင် အဖြစ် အသိမှတ်ပြုပြီး အဲဒီလူတွေက တင်မြောက်တဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ မြို့နယ်အလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ကို တင်မြောက်နိုင်မယ်။ အဲဒီ တင်မြောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲက လာမည့် ပထမဆုံး ရခိုင်အမျိုးသား ညီလာ ခံကို တက်ရောက်ဖို့ မြို့နယ်ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။”
ယခုကဲ့သို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက် အဘက်ဘက်မှ တွန်းအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြသည့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒေါက်တာ အေးမောင်က ယခုကဲ့သို့ ဆက်ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ထက် အများကြီး နိုင်ငံ ရေး အမြင်ရှိပါတယ်။ ပြည်သူတွေထဲမှာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေ၊ နိုင်ငံရေးဝါရင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်။ ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီတည်ထောင်နိုင်အောင် အကြံ ပေး တိုက်တွန်း တောင်းဆိုတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း ခြေလှမ်းမှန်မှန်နဲ့ လှမ်း ပြီး နောက်တက်လာမဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို လက်ပြောင်းလက်လွဲလုပ်နိုင်မယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ယုံ ကြည်ပါ တယ်။”
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ကိုဖျက်သိမ်းပြီး ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ (ANP) တည်ထောင်ရန် နှစ်ဘက်ပါတီခေါင်းဆောင်များက ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ တွင် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
Posted by Than Htoon at 3:37 PM
Labels: ပါတီ, ရခိုင်, နိုင်ငံရေး
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ စစ်တကောင်းဒေသမှ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လူနည်းစုဖြစ်သွားနိုင်ဖွယ်ရှိ
(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု နေထိုင်နေသော စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု နေထိုင်နေသော စစ်တကောင်းတောင်းနယ်တွင် ယခုအခါ မြေပြန့်မှ ဘင်္ဂလီများ ၀င်ရောက်ပြောင်းရွှေ့ အခြေချနေထိုင်မူကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လူနည်းစု အဖြစ်သို့ များမကြာမီက ကျရောက်သွာံးနိုင်ကြောင်း ဒေသအတွင်းမှ လူနည်းစု လွှတ်တော်အမတ် တစ်ဦးက ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လွှတ်လပ်ရေး မတိုင်မှီ စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ်ရှိ ဘင်ဒရိုဘင် (ရွာတော်)၊ ခါကဆိုရီနှင့် ရန္ကာမတီ ခရိုင် (၃) ခုတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် တခြား လူနည်းစုများ၏ လူဦးရေမှာ ၇၅ ရာခိုင်နုန်း၊ မူဆလင် ဘဂီလီ လူဦးရေမှာ ၂၅ ရာခိုင်နုန်းရှိခဲ့ရာမှ အခုအခါလူဦးရေမှာ မတိမ်းမယိမ်း အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွာပြီဟု သိရသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အများဆုံးနေထိုင်သော စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်သုံခုတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ အပါဝင် လူနည်းစု လူဦးရေမှာ ၈၅၂၅၄၀ ဦးရှီပြီး၊ ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်နေထိုင်သူ ဘင်္ဂလီ လူဦးရေမှာ ၇၆၁၄၄၉ ဦးရှိကြောင်း စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ် ကောင်စီ ဥက္ကဌ ဘီဘာဟာဒူရ် ခေါ် ဦးရွှေသိန်းက ပြောသည်။
တောင်တန်းနယ်အတွင်း ရှိနေသည့် လူနည်းစုများပိုင်ဆိုင်သော လယ်မြေများနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို မြေပြန့်မှ အခြေချရန် ၀င်ရောက်လာသူ ဘင်္ဂလီအများစုမှ အတင်းအဓမ္မ ၀င်ရောက် ကျူးကျော် သိမ်းယူထားခြင်း ၎င်းက ပြောဆိ်ုသည်။
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်ရှိ ဘင်ဒရိုဘင် (ရွာတော်)၊ ခါကဆိုရီ (ဖလံထောင်) နှင့် ရန္ကာမတီ (သက်ထောင်) ခရိုင် (၃) ခုအတွင်း မြေနေရာ အငြင်းပွားအများအပြား ပေါ်ပေါက်နေရာ ၎င်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးရန် အတွက် ဘင်္ဂလာအစိုးရမှ ၂၀၀၁ ခုမှ စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် တစ်စုံတရာ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က ဒါကာမြို့တွင် The Kapaeeng Foundation က ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားတခုတွင် စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်း မြေယာသိမ်းယူမှု ပိုများပြားလာနေဟု ပြောဆိုကြောင်း http://www.banglanews24.com ဆိုသည်။
၎င်းသတင်းတွင်ပင် လတ်တလော အတွင်း စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်တွင် အမျိုးသမီး ၄ ဦးအပါအ၀င် လူနည်းစု ၁၁ ဦးသတ်ဖြတ်ခံရပြီး လူနည်းစုပေါင်း ၄၁ ဦး မတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရကာ ၃၄၆ မိသားစု ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းပြင် လုယက်ခံရခံရပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၇ ခု မီးရှို့ခံရကာ၊ မိသားစုပေါင်း ၄၀၀ မှ လူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ဘင်္ဂလား-အိန္ဒိယနယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြသည်။
Posted by Than Htoon at 3:35 PM
Labels: နယ်စပ်ရေးရာ, ဘာသာရေး
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု နှင့် ပတ်သက်၍ RNDP ပါတီ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၄)
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု နှင့် ပတ်သက်၍ RNDP ပါတီ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၄)
နေ့စွဲ - ၀၄ မတ်လ ၂၀၁၄
လာမည့် ဧပြီလ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာ၌ အခြေခံအားနည်းချက်များ ရှိနေသဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အချာအာဏာကို ကြီးစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သည့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူသည့်စနစ် ဖြစ်သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
လူ့အခွင့်အရေးဦးစားပေး သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရန် နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ငွေကို လက်ခံပြီး ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီများအား လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူခြင်းမှာ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြေလည်ရေးကို ဦးစားပေးသော အစီအစဉ်သာဖြစ်သဖြင့် ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်ပါသည်။
အတိတ်ကာလမှ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြေလည်ရေး နိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေ မသုံးစွဲရရေးကို ဦးစားပေး၍ ပေါ့ပေါ့တန်တန် ဖြေရှင်းခဲ့မှုများကြောင့် တရားမ၀င် လူဦးရေဖောင်းပွမှုဒဏ်နှင့် လူမျိုးအတုအမည် ဖန်တီးမှု ဆိုးကျိုးကို ၂၀၁၂-ခုနှစ်တွင် ရခိုင်လူမျိူးများ ခါးစည်း၍ ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထို သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူဦးရေ စာရင်းဇယား အတိအကျ ရရှိရေးကိုသာ ရည်ရွယ်သည် ဟု ဆိုစေကာမူ “အခြား” ဆိုသည့် ဇယားကွက်လပ်၌ လူ့အခွင့်အရေးအရ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ထည့်သွင်းနိုင်သည် ဟု ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်နောင် မလိုလားအပ်သည့် ပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အတွက် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းအပေါ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) ၏ သဘောထားကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်သည်။
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဘင်္ဂါလီများအား သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် “အခြား” ဆိုသည့် ကွက်လပ်ဇယား နေရာ၌ “ဘင်္ဂါလီ” ဟုသာ ထည့်သွင်းရမည် (သို့မဟုတ်) ကုဒ်နံပါတ်တစ်ခုခုကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသော လူမျိုးလိမ်နာမည်ကို (လုံးဝ) သုံးခွင့်မပြုရန် တောင်းဆိုသည်။
၂။ ရခိုင်ပြည်နယ် (၁၀) မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများအားစာရင်းကောက်ယူရန် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး စာရင်းကောက် စာရင်းစစ် (၁၃၀၂) ဦးကို လက်သိပ်ထိုး တာဝန်ပေးထားသည် ဟု သိရှိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု/မဖြစ်မှု မသေချာသူများက ကောက်ယူပြုစုပေးသည့် ဘင်္ဂါလီ လူဦးရေစာရင်းကို RNDP ပါတီက လုံးဝ အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည် မဟုတ်။
၃။ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်က လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်မှာ၊ ရခိုင်ပြည်သူများ နှင့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက တောင်းဆို ထားကြသည့် အတိုင်း၊ ၁၉၈၂-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ဥပဒေ နှင့် စစ်ဆေးပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိသူများကို တိတိကျကျ အရေးယူရန် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်အရေးယူရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းသည်။
၄။ ဤကဲ့သို့ လက်မခံနိုင်သည့် နည်းစနစ်များဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုကို RNDP ပါတီက ကန့်ကွက်သည်။ လိုအပ်သည်များကို အချိန်မီ ပြန်လည်ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ပေးရန် RNDP ပါတီက အလေးအနက် တောင်းဆိုသည်။
Posted by Than Htoon at 4:03 PM
Labels: ပါတီ, ဘင်္ဂလီ, ရခိုင်, သန်းခေါင်စာရင်း
ဘင်္ဂါလီ တစ်ထောင်ကျော် အသုံးပြု၍ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်မည့် အစီအစဉ် RNDP ကန့်ကွက်
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ၁၀ မြို့နယ်၌ ဘင်္ဂါလီများကို သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ဘင်္ဂါလီ ၁၃၀၂ ဦး အသုံးပြုကာ ကောက်ယူမည့် အစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ (RNDP) က မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
နိုင်ငံသား ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်း မရှိဘဲ ဘင်္ဂါလီ ၁၃၀၂ ဦးကို သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ရန် တာဝန် ပေးထားသဖြင့် ရရှိသည့် လူဦးရေ စာရင်းကို လုံးဝ အသိအမှတ်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဘင်္ဂါလီများ၏ လူဦးရေစာရင်း ထွက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း RNDP က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ဘင်္ဂါလီ ၁၃၀၂ ဦးကို သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခိုင်းမယ် ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ အခိုင်အမာ ရရှိထားပြီ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
သို့သော်လည်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ခိုင်ခိုင်စိုးကမူ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ဘင်္ဂါလီ တစ်ထောင်ကျော် အသုံးပြုရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ စီစဉ်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ဘင်္ဂါလီများကို သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ရာတွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် အမည်ကို အသုံးပြုခွင့် မပြုဘဲ ဘင်္ဂါလီဟုသာ ကောက်ယူရန်၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေပါ အတိုင်း နိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် မရှိသူများကို တိတိကျကျ အရေးယူရန်၊ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမည့် နည်းစနစ်များကို ပြင်ဆင်ပေးရန် RNDP က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်တဲ့အခါ ရိုဟင်ဂျာလို့ ထည့်ကောက်လိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ ရှိတယ် ဆိုပြီး ထောက်ပြစရာ ဖြစ်လာမယ်” ဟု RNDP က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
သန်းခေါင်စာရင်းတွင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးများ အပေါ် အခြေခံကာ လူဦးရေနှင့် စုဖွဲ့မှုများကို ကောက်ယူမည် ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးနှင့် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာဟု သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရုံဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရမည် မဟုတ်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောဆိုထားသည်။
By- The Voice Week
Labels: ပဋိပက္ခ, ပါတီ, ဘင်္ဂလီ, ရခိုင်, သန်းခေါင်စာရင်း
သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာအမည် ဖြည့်သွင်းတာ လက်မခံဖို့ RNDP တိုက်တွန်း
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခံမှု အသိပညာပေး လက်ကမ်း စာစောင်တွေကို တွေ့ရစဉ်
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမျိုးအမည်ရေးသွင်းရာမှာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးလို့ ထည့်သွင်းစေချင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ကုဒ်နံပါတ်တစ်ခုခု တိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးဖို့နဲ့ ရိုဟင်ဂျာလို့ ဖြည့်သွင်းတာကို လုံးဝ လက်ခံခြင်းမပြုဖို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP က မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ သဘောထားကြေငြာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဇောဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။
"အစိုးရက လူဦးရေသက်သက်ကို သိချင်တာဖြစ်တယ်၊ တခြားနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မဖြစ်မှုနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ နောင်မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေရှိပါတယ်၊ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ အဲဒီအခြားဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာ ရိုဟင်ဂျာတို့လို နာမည်လိမ်တယ်၊ အဲလိုမျိုးလူတွေထည့်ပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာနာမည်ခံလူ ဘယ်လောက်ရှိပါတယ်၊ ဘယ်နှစ်သိန်းရှိပါတယ်၊ ဘယ်နှစ်သန်းရှိပါတယ်၊ အဲလိုမျိုးတချိန်ချိန်မှာ ပြောပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အခွင့်အရေးတောင်းတယ်ဆိုတာက မဖြစ်လာရအောင် အခုကတည်းက ကြိုရှင်းထားတဲ့သဘောပါ"
ဒါ့အပြင် ကြေငြာချက်ထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့နယ် ၁၀ ခုလောက်မှာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတစ်ထောင်ကျော်ကို စာရင်းကောက်၊ စာရင်းစစ်သူတွေအဖြစ် တာဝန်ပေးထားတဲ့ကိစ္စဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မဖြစ်မှု သေချာမသိသူတွေက ကောက်ယူပြုစုပေးတဲ့ ဘင်္ဂါလီလူဦးရေစာရင်းသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီစာရင်းကို RNDP ပါတီအနေနဲ့ လုံးဝအသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မွတ်စလင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကတောင်းဆိုနေကြသလို နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းစတဲ့ အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နောက်နောင် ပဋိပက္ခတွေ ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုမရှိရအောင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး အခုလိုတိုက်တွန်းရတာလို့လည်း RNDP ပါတီက ပြောပါတယ်။
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကို လာမယ့် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှာ လာမယ့် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပမယ့် ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတွေသိရှိနိုင်ဖို့ ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မြောက်ဦးမြို့က အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဒေသခံတွေနဲ့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် ကျောက်ဖြူ၊ မအီ၊ မင်းပြား စတဲ့မြို့တွေမှာ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတွေကလည်း ညီလာခံအကြောင်း လိုက်လံရှင်းပြခဲ့သလို ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ မြို့နယ်အနှံ့မှာလည်း ရှင်းလင်းပွဲတွေ ဆက်တိုက်ကျင်းပသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံကို လာမယ့် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ကနေ မတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှာ ၅ ရက်တာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ရခိုင့်လူ့ဘောင်သစ်တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေး စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အဲဒီညီလာခံမှာ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပြည်ပရောက် ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ် အနည်းဆုံး ၅၀၀ လောက် တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 1:47 PM
Labels: ပါတီ, ဘင်္ဂလီ, ပြည်ထောင်စုအစိုးရ, ရခိုင်, သန်းခေါင်စာရင်း
ကျောက်ဖြူ အထူး စီးပွားရေးဇုန် ဖော်ဆောင်ရေး ဒုတိယ အဆင့် တင်ဒါပေး
ကျောက်ဖြူ ရွှေ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်း၌ ပါဝင်သော မလကျွန်းရွာရှိ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ သန့်စင် စက်ရုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင် (ဓာတ်ပုံ – ကိုစိုး / ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ အထူး စီးပွားရေးဇုန် ဖော်ဆောင်ရေး အတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက် အကြံပေး ကုမ္ပဏီကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ သန်းခွဲဖြင့် ငှားရမ်း လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံ ခန့်ခွဲရေး ကော်မတီက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို အဆင့် ၄ ဆင့်ဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိရာ ယခု တင်ဒါ ခွင့်ပြုခြင်းသည် ဒုတိယ အဆင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တင်ဒါ တင်သွင်း ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် အကြံပေး ကုမ္ပဏီ အုပ်စု ၁၇ ခု အနက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက် CPG (Creative Professional Groups) အကြံပေး ကုမ္ပဏီ အုပ်စုအား ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် KPMG ကို အရံ ကုမ္ပဏီ အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံ ခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပါရှိသည်။
တင်ဒါ တင်သွင်းရန် စိတ်ဝင်စားသည့် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီ အုပ်စု ၃၁ ခု ရှိပြီး ကုမ္ပဏီ အုပ်စု ၁၇ ခုက တင်ဒါ တင်သွင်းကြောင်း မတ်လ ၃ ရက်က မြန်မာ့မီးရထား ရုံးချုပ်တွင် ပြုလုပ်သည့် ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ သတင်းထုတ်ပြန် ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျောက်ဖြူ အထူး စီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဌာန ဒု ဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း က “ဒီအကြံပေး အဖွဲ့က Developer (ရင်းနှီး တည်ဆောက်သူများ) ရွေးပြီးတဲ့ အဆင့်အထိပဲ အကျုံးဝင်မယ်။ စီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော်ရေး အတွက် စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အဖွဲ့ ထပ်ခေါ်ရမယ်”ဟု ပြောသည်။
ရွေးချယ်ခံရသည့် CPG ကုမ္ပဏီကို စင်္ကာပူ အစိုးရ၏ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနက ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အိမ်ရာ ကုမ္ပဏီ ဖြစ် သည့် DTZ ၊ ရေကြောင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်း ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် Global Maritime and Post Services၊ စာရင်းကိုင် ကုမ္ပဏီ EY (Ernst&Young) နှင့် စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေး ကုမ္ပဏီ PM Link တို့ စုပေါင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီ အုပ်စုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တင်ဒါ ရရှိသွားသော ကုမ္ပဏီအုပ်စုက လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘ၀ ထိခိုက်မှုများကို စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်ရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု ဒု ၀န်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ စီးပွားရေးဇုန် အတွင်း လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရေး လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် အကြံ ပေး ဝန်ဆောင်မှု ပြုနိုင်ရန် ယခုကဲ့သို့ တင်ဒါပေး ငှားရမ်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစီမံကိန်း အတွက် လုပ်သား အင်အား ၂၅၀,၀၀၀ ခန့် လိုအပ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သဘာဝအတိုင်း ရှိနေသည့် ဒီရေ ရောက် သစ်တောများ ကျယ်ပြန့်စွာ ရှိနေကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
CPG ကုမ္ပဏီ အုပ်စုက အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေး၊ ရေ ရရှိရေး၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက် သွယ်ရေးနှင့် ဟိုတယ်များ အစရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်အဆင်ပြေရေး ကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီး ဌာနများ၊ ပြည်နယ် အစိုးရ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အတူ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒု ၀န်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့နှင့် ၄ မိုင် အကွာရှိ စစ်တော ကျေးရွာ အနီးရှိ ဧက ၁ ထောင် ကျော်တွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် အဆိုပါစီမံကိန်း အတွက် လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာ ပေးနိုင်ရန် ၅၀ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် စက်ရုံကို လည်းကောင်း၊ ဒေသထွက် သဘာဝဓာတ် ငွေ့ ၅၀ မဂ္ဂါဝပ် ရရှိရန် စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသွားသော ကုမ္ပဏီက မိမိဆန္ဒ မပါဘဲ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်း ပြုစုပေးရန် လိုအပ်ပြီး စီမံကိန်း အတွက် ပြည်သူများကို ပြောင်းရွှေ့နေရာ ချထားရာတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ အတိုင်း ဆောင် ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်ဟု ဒုဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းနေရာသည် လူနေထိုင်မှု နည်းပါးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး Kalvin Chia Partnership Law Firm မှ ရှေ့နေ ဦးသန်းမောင် က “လူအများစုက တခြားနေရာကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး၊ တပြိုင်တည်းလိုပဲ ဒေသခံ အသိုင်းအ၀ိုင်းလည်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမှာပါ၊ ကျနော်တို့ စီမံကိန်းမှာ သူတို့ အလုပ်လုပ်လို့ ရပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူ အထူး စီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းတည်ရှိပြီး ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား ထိခိုက်မှု မရှိစေရန် အာမခံနိုင်ကြောင်း ဒုဝန်ကြီး ဦးမြင့် သိန်းက ပြောသည်။
“စီမံကိန်း လုပ်မယ့် နေရာဟာ ကျွန်း ဖြစ်တဲ့အတွက် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းလို့ ရနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်၊ ရခိုင် တိုင်းရင်း သားတွေ အပေါ် ကျနော် ယုံကြည်တယ်၊ နောက်ထပ် ပဋိပက္ခ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး၊ လုံးဝ အာမခံရဲပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြော သည်။
အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး၊ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရခိုင် ဒေသခံများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။
Labels: ရခိုင်, သဘာဝအရင်းအမြစ်, ကျောက်ဖြူ
၂၀၁၅ ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ အနိုင်ရပါက ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ဟု ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများ အနိုင်ရပါက ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာနိုင် သည်ဟု ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး(ကြံ့ခိုင်ရေး)ပါတီ၏ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေက ပြော သည်။
ရခိုင် အမျိုးသားရေးပါတီများ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသွားပါက ရခိုင်ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားလာနိုင်သည့် အတွက် ဒေသကွက်၍ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလျှင်လည်း ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကသာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကိုသာ မဲပေးကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း စစ်တပ် အရာရှိဟောင်း တဦးလည်း ဖြစ် သူ ဦးလှဆွေ က ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ပါတီက အနိုင်ရရင် ဘင်္ဂါလီ(မွတ်စလင်)တွေက ခေါင်းမထောင်ရဲဘူးဗျ၊ ငြိမ်အောင် ထိန်းထားနိုင်တယ်၊ တကယ်လို့ ရခိုင်ပါတီတွေ နိုင်ပြီး တခုခုလုပ်ရင် ပြဿနာရှာနိုင်တယ်၊ ဗလီတွေ ထဲမှာ သွေးထားတဲ့ ဓားတွေ အများကြီး ရှိတာကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ဖူးခဲ့တယ်၊ ရှင်းလင်းခဲ့ဖူးတယ်၊ ကျနော်က ရခိုင်မှာ ၉ နှစ် နေခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ပြော တာပါ”ဟု ဆိုသည်။
ထို့အတူ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသည် စစ်တပ်မှ ဆင်းသက်လာပြီး စစ်တပ်၏ ကျောထောက်နောက်ခံ ရှိသည့် ပါတီဖြစ်၍ ရခိုင်ပြည် တွင်းရေး ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားပါက တည်ငြိမ်ရန် ထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုသာ မဲပေးကြရန် ပြောဆို ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးလှဆွေ ၏ ပြောကြားချက်ကိုလည်း Hot News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဦးလှဆွေ၏ ပြောဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ALD) ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် က “ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်က ကိုယ့်ပါတီ အနိုင်ရရေးအတွက် တခြားပါတီကို တိုက်ခိုက်တာ၊ အပုပ်ချ စည်းရုံးတာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက် စည်းရုံးတာဟာ မလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ၊ အဲဒီလိုမျိုး စည်းရုံးရေး မလုပ်ရဘူးလို့ ကော်မရှင် ဥပဒေမှာ ပြဌာန်းထားတယ်၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပြီး ဒီလို ပြောဆိုနေတာဟာ ဥပဒေနဲ့ငြိနေတယ်”ဟု ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
ရခိုင်နိုင်ငံရေး ပါတီများသည် အမျိုးသားရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် ပါတီများ ဖြစ်သော်လည်း အစွန်းရောက် ပါတီများ၊ ပုဂ္ဂိုလ် များ မဟုတ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ရခိုင်လူမျိုးများ အတွက်သာမက တိုင်းရင်းသား အားလုံး တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပြည်ထောင်စု အရေး အတွက် လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးအေးသာအောင် က ဆက်ပြော သည်။
၎င်းက“ကိုယ်စားလှယ် တဦးအနေနဲ့ လှုံ့ဆော်တဲ့ စကားမျိုး လုံးဝ မပြောသင့်တဲ့အပြင် ကော်မရှင် ဥပဒေကိုလည်း လိုက်နာဖို့ လိုအပ်တယ်၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံမှာ အနိုင်ရတဲ့ပါတီကပဲ အစိုးရ ဖွဲ့တာ၊ ဦးဆောင်တာဟာ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းပါ၊ ဘယ်ဒေသမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ ထောက်ခံတဲ့ပါတီ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲ အနိုင်ရမှာပါ၊ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတယ်”ဟုလည်း ၎င်းက ဆို သည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP) ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ အေးမောင် ကလည်း ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားအရ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ဦးလှဆွေ အနေဖြင့်လည်း ၎င်း၏ လွတ်လပ်ခွင့်အရ မည်သို့ပင် တိုက်ခိုက်၊ ပုတ်ခတ် စေကာမူ တုံ့ပြန်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
၎င်းက“ဦးလှဆွေ ပြောတာကို ဗွေမယူပါဘူး၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောပိုင်ခွင့်ရှိလို့ ပြောတယ်ပဲ မှတ်ယူပါတယ်၊ ရခိုင်ပြည်ကို ရခိုင် အမျိုးသားပါတီက ဦးဆောင်နိုင်မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်နိုင်မယ်၊ အမျိုးသား ပါတီကြီး တခုဖြစ်ပေါ်လာအောင် လုပ်တာဟာလည်း ဖက်ဆစ် စနစ်ကို သွားဖို့ မဟုတ်ဘူး၊ ရခိုင်ပါတီက အစိုးရဖွဲ့နိုင်၊ ဒေသ လွှတ်တော်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ရင်လည်းပဲ ထင်ရာစိုင်းလို့ မရဘူး၊ ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းကပဲ အရာရာကို လုပ်ဆောင်ရမှာပါ”ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ အနိုင်ရပြီး အစိုးရတရပ် ဖွဲ့စည်းနိုင်လျှင်လည်း ဥပဒေဘောင် အတွင်းကသာ လုပ်ဆောင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ဒေသတွင် နေထိုင်သည့် မည်သည့် လူမျိုး၊ မည်သည့် နိုင်ငံသားကိုမဆို လုံခြုံစိတ်ချစွာ နေထိုင်နိုင်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင် ခေါင်းဆောင်များ က ပြောသည်။
ဦးလှဆွေက “ရခိုင်တွေအနိုင်ရလို့ မတည်ငြိမ်ရင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာမယ်၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေကပြောတယ် သူတို့လူမျိုး ဦးရေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ကျန်တော့ ပျောက်သွားမှာ စိုးရိမ်တယ်လို့ ပြောတယ်၊ ဘင်္ဂါလီတွေ ကြီးစိုးသွားပြီလို့ ပြော တယ်၊ ဒီတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို အဲဒီ ရာခိုင်နှုန်းထက် လျော့သွားမှာ စိုးလို့ ကျနော်က စေတနာနဲ့ ပြောတာ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အုပ်ချုပ်ရင် ဘင်္ဂါလီတွေက မလှုပ်ရဲကြဘူး”ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ တိုင်းရင်းသား ဒေသ အများစုသည် သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကြောင့် ဆင်းရဲနေကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဒေသ အားလုံး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ တန်းတူရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသား အား လုံးပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စု ပါတီကြီး တခုကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၌ လူမျိုးကြီး ၀ါဒကို ကျင့်သုံးလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် တချို့က နောက်ပြန် သွားလိုကြောင်း ဒေါက်တာ အေးမောင် က ပြောဆိုသည်။
“အတိတ်က သမိုင်းကြောင်းတွေအရ ရခိုင်ဒေသမှာ ရခိုင်တွေ နိုင်ငံရေး အားကောင်းလာရင်၊ ရခိုင်တွေ အုပ်ချုပ်လာရင် နိုင် ငံ က ခွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဟာ ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒီ တချို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတယ်၊ ဒါကိုပဲ လက်ဆင့် ကမ်း လာတော့ အမျိုးသားရေး ပြင်းထန်သူတွေက စိတ်ထဲ စွဲနေတဲ့ အတွက် ရခိုင်ဒေသကို ထိန်းချုပ်ထားဖို့ နည်းလမ်းစုံ နဲ့ ကြိုး ပမ်းတယ်၊ နိုင်ငံရေးအရ ထိန်းညှိဖို့ ဘင်္ဂါလီတွေကို မွေးထားတယ်၊ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတယ်”ဟု ဒေါက် တာ အေးမောင် က ဆိုသည်။
ရခိုင်ဒေသ ပြဿနာသည် ယခုအခါ ရခိုင်ဒေသ တခုတည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ခြင်း မဟုတ်တော့ဘဲ တနိုင်ငံလုံးနှင့် ဆက်စပ် နေပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ပါ သက်ရောက်မှု ရှိနေကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မှသာ နိုင်ငံ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပါတီများ အနိုင်ရပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပြဿနာ အများအပြားရှိ၍ အန္တရယ်ကြီးသည့်အတွက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရခိုင်ပါတီနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး မျှမျှတတ အုပ်ချုပ်ရလျှင် အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁၂ မှ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည့် ဦးလှဆွေက ပြောသည်။
ALD နှင့် RNDP တို့သည် ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ရခိုင်ပြည်သူများ၊ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ၏ တိုက်တွန်းချက်အရ ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ (Arakan National Party-ANP) အဖြစ် တည်ထောင်ရန် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြ သည်။ ANP ပါတီအား ပေါင်းစည်းရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ်ကာ တရားဝင် မှတ်ပုံ တင်ခွင့်ကို လျှောက်ထားဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ALD ပါတီသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရခိုင်ဒေသတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီး RNDP ပါတီသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲ၌ အပြတ်အ သတ် အနိုင်ရထားသည့် ရခိုင်နိုင်ငံရေး ပါတီများ ဖြစ်သည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် အတွက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ရခိုင်ပါတီကို အနိုင်ရရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပါတီ၏ ပြည်နယ်တာဝန်ခံ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးမောင်ဦး က လမ်းညွှန်ထား ကြောင်း၊ အနိုင်ရရေး မလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပါတီဝင်များကို ထုတ်ပယ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ထားကြောင်း ရခိုင်ဒေသခံများ က ဧရာဝတီ ကို ပြောဆိုကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လူအသေအပျောက် နှင့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အတွက် အစိုးရ အာဏာပိုင်များက အရေး ပေါ် အခြေအနေ ကြေညာခြင်း၊ ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ အချိန်အထိလည်း တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးပေ။
Posted by Than Htoon at 1:42 PM
Labels: ပဋိပက္ခ, ပါတီ, ရခိုင်
ဒေသတချို့မှာ MSF လုပ်ငန်းတွေ ပြန်စမည်
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့က နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ရုံးမှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တွေ့ရစဉ်
နယ်စည်းမထား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF Holland (AZG) ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လုပ်ငန်းတွေကလွဲပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဒေသတချို့မှာ လုပ်ငန်းတွေပြန်စဖို့ အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း MSF က ပြောပါတယ်။
MSF ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြာသပတေးနေ့က ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာပါ။ ရပ်ဆိုင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဘက်လုံးက မဖေါ်ပြခဲ့ကြပေမဲ့၊ သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး MSF ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေအပေါ် အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက စိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်လို့ ဖေါ်ပြကြပါတယ်။
စနေနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ MSF ရဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်စခွင့်ရခဲ့ကြောင်း၊ ဒီအတွက် MSF အနေနဲ့ အားတက်မှုနဲ့အတူ လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပေမဲ့၊ တချိန်တည်းမှာလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်က ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် စိုးရိမ်မိကြောင်း၊ MSF ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအားလုံးဟာ လူမျိုး ဘာသာနဲ့ တခြားအချက်တွေကိုမကြည့်ဘဲ ဆေးဝါးကုသမှု လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာသာ အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဆေးခန်းတွေပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် HIV/ AIDS ဝေဒနာရှင် သုံးသောင်းနဲ့ တီဘီ အဆုတ်နာဝေဒနာရှင် သုံးထောင်တို့ အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ ဆေးဝါးတွေ မရနိုင်တော့ဘူးလို့လည်း MSF က ပြောပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 5:17 PM
Labels: INGO, ကျန်းမာရေး, ရခိုင်
MSF ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က လုပ်ငန်းတွေကို လွှဲပြောင်းယူဖို့အသင့်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရတော့ တဲ့ နယ်စည်းမထား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိ်ု လွှဲပြောင်းယူဖို့ အသင့်ရှိနေကြောင်း ပြည်နယ် အာဏာပိုင်တွေက ပြောဆိုကြောင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ IRIN သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းတွေကို သီတင်းတစ်ပတ်အတွင်း လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးငြိမ်း က ပြောဆိုကြောင်းလည်း ဖေါ်ပြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ဟာ ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေထက် မွတ်စလင်တွေအပေါ် ပိုပြီး မျက်နှာလိုက်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဝေဖန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး၊ အစိုးရကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေအတွင်း MSF ဟာ သတင်းမှားတွေ ဖြန့်ချီခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာတော့ နယ်စည်းမထား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ရဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကို တိုးပေးဖို့ အစိုးရက ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ MSF ကို ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင် ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ ၀န်ထမ်း ငါးရာကျော်နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ MSF ဟာ အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ MSF ရဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေ လွဲပြောင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနမှာ အခက်အခဲ တစုံတရာမရှိပါဘူးလို့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးငြိမ်းက ပြောဆိုကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ IRIN သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အဆိုအရ ရခိုင်ပြည်နယ် လူဦးရေ သုံးသန်းကျော်မှာ ဆရာဝန် ၄၅၀ ၀န်းကျင်ပဲရှိတယ်လို့လည်း သတင်းမှာဖေါ်ပြပါတယ်။
Posted by Than Htoon at 5:13 PM
Labels: INGO, ကျန်းမာရေး, ရခိုင်, အစိုးရ
ရခိုင်ပြည်ထွက်ဆန်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့မှု များပြားလာ
ရခိုင်ပြည် မောင်တောနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှ ဘင်္ဂလာဆိပ်ကမ်းများသို့ ဈေးနိမ့်ခံ၍ ဆန်တင်ပို့မှုများ ယခုတလော ပိုမိုများပြားလာကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆန်အိတ်များကို ရွှေ့နေသော အလုပ်သမားများ။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး ၂၀၁၃-၁၄ နှစ်တွင် မောင်တောဆိပ်ကမ်းမှ ဘင်္ဂလာဆိပ်ကမ်းများသို့ လအနည်းငယ်အတွင်း ဆန်တန်ချိန်ပေါင်း ၃၀၀၀ နီးပါးအထိ တင်ပို့ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၇၅ ဖြင့်သာ တင်ပို့နေရပြီး နိုင်ငံတကာပေါက်ဈေးအဆင့်သို့ မရယူနိုင်သေးကြောင်း မောင်တောမြို့မှ အမည်မဖေါ်လိုသူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
"ရခိုင်-မြန်မာပြည်ထွက် ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဘင်္ဂလာနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေက ၀ယ်လိုအား သိပ်ကြီးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံ အနေနဲ့လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရောင်းလိုအားကြီးနေတော့ ဈေးအမြဲတမ်း နှိမ်ခံနေရတာပေါ့၊ ဈေးကျားကွက်လုပ်ဖို့က နားမလည်တာထက် အခြေအနေမပေးတာပါ၊ အမှန်က ၀ယ်လိုအားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကို ကုန်ပစ္စည်းထွက်တဲ့နိုင်ငံက ဈေးပြောသလောက် ရောင်းနိုင်ပါတယ်၊ နောက်တခုက ကုန်တွေအားလုံးကို နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဝင်ဖို့ အဆင့်အတန်းမီ မထုတ်လုပ်နိုင်တာက ဈေးနှိမ့်ခံရတာလည်း ရှိပါတယ်၊ အကုန်ပြောရရင် တို့နိုင်ငံက အာဏာပိုင်တွေက အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးကျားကွက်ကို ဘယ်လိုမှ လိုက်မမီတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ရက်ချင်းပြန် စီးပွားရေးသမားတွေအဖို့ ဘာအာမခံချက်မှ မပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်နေလေတော့။"
ဆက်လက်ပြီး၎င်းက ရခိုင်ပြည်မှ ဘင်္ဂလာသို့ များသောအားဖြင့် တင်ပို့သောဆန်မှာ ဧည့်မထဆန်အမျိုးအစားများဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်ပေါက်ဈေး ရှိခဲ့သည့် ဆန်တတန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈၅ မှ ယခုဈေးနှိမ်ခံ၍ ၃၇၅ သို့ လျော့ဈေးဖြင့် တင်ပို့နေရကြောင်းနှင့် ရခိုင်စီးပွားရေးသမားများ မျှော်လင့်သလောက် တွက်ခြေမကိုက်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလာသို့လာရောက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးစားသူများအနေဖြင့် လူလိမ်ခံရသူများ အများအပြားရှိကြောင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် လာရောက်စဉ် အသက်ရှုံးဆုံးခံရသူများ ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသူများမှာလည်း ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် လှည့်ဖျား ခံနေကြရကြောင်း နယ်စပ်သတင်းများကဆိုသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်စီးပွားရေးသဘောတူညီချက် စာချုပ်ကို ၁၉၉၇ ခု၊ စက်တင်္ဘာလက ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ဆန်နှင့်အတူ အဓိကတင်ပို့ခဲ့သော ငါးစိမ်း၊ ငါးခြောက်၊ ပုဇွန်၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့် သစ်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ရခိုင်ပြည်၌ လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင် အကြမ်းဘက်သမားများ သောင်းကျန်းမှုကြောင့် လျော့ဆင်းသွားကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခမတိုင်ခင် ရခိုင်ပြည်တွင်းထွက် ကုန်ပစ္စည်းများမှာ နယ်စပ်စီးပွားရေးကို ပဲ့ကိုင်ခဲ့သော ဘင်္ဂလီများထံ ဒလဟော တင်ပို့ခဲ့မှုများရှိခဲ့၍ ပြည်တွင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများ ထိုးတက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် တင်ပို့သည့် ကုန်ဈေးနှုန်းများလည်း ထိုးကျဆင်းခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်အတွင်းတွင် စပါးတင်း ၁၀၀ ကို ကျပ် ၃ သိန်းသာ ပေါက်ဈေးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနှင့် အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံများအနေဖြင့် ၎င်းတို့နှင့်အတူ စီးပွားရေးကို အရှုံးခံလုပ်နေသမျှ နှစ်သက်မည့်အခြေအနေရှိနေပြီး တိုးတက်သောနိုင်ငံများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ သဘောတူစာချုပ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်လျှင် ပုံစံအမျိုးမျိုးကြံပြီး ဖျက်ဆီးမည့် အစီအစဉ်များ ရှိနေကာ မြန်မာ့ကုန်ပစ္စည်းများကို အတင်းရလိုမှုရှိနေကြသည်။
Posted by Than Htoon at 5:09 PM
နေပြည်တော်၌ BIMSTEC ဆွေးနွေးပွဲ အိမ်နီးချင်း ၆ နိုင်ငံတက်ရောက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်တွင် မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ကျင်းပမည့် BIMSTEC ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ ၀န်ကြီးချုပ် အပါအ၀င် အိမ်နီးချင်း ၆ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ ယနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
နေပြည်တော်က ရွှေတိဂုံနှင့်တူသော စေတီ။
ဘင်္ဂလာ ၀န်ကြီးချုပ် ဆိုက်ခ်ျ ဟာဆီန်းနာ အပါအ၀င် အဖွဲ့ငင် ၃၂ ဦး ဒက္ကားလေဆိပ်မှ ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ ထိုင်း၊ ဘူတန်နှင့် သိလင်္ကာ နိုင်ငံတို့မှာ The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) ၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ဦးစွာဆိုက်ရောက်ကာ နေပြည်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်း BIMSTEC တွင် မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ၊ ထိုင်း၊ ဘူတန်နှင့် သိရိလင်္ကာ (၇)နိုင်ငံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် ဘင်္ဂလာ၊ ဘူတန်၊ အိန္ဒိယနှင့် နီပေါနိုင်ငံများမှ တက်ရောက်လာသော ခေါင်းဆောင်များနှင့် အကျိုးတူ ကိစ္စရပ်များအား ယင်းအစည်းအဝေးပြင်ပတွင် သီးသန့်ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ဘင်္ဂလာမှ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဆိုက်ခ်ျ ဟာဆိန်းနာ ဦးဆောင်ပြီး သွားရောက်မည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စနေနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
Posted by Than Htoon at 5:08 PM
Labels: ပြည်ထောင်စုအစိုးရ, နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး
မောင်တော ရဲမှူးချုပ် ဦးတင်ကိုကိုနှင့်အဖွဲ့ ရဲစခန်းသစ် ၄ နေရာအား တိုးမြင့်သတ်မှတ်
မောင်တောခရိုင်အတွင်း လုံခြုံရေးအရ ရဲစခန်းသစ် (၄)ခုအား များမကြာမီဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် ရဲမှူးချုပ် ဦးတင်ကိုကို ဦးစီး၍ နယ်စပ်လုံခြုံရေးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က နယ်မြေများကို သွားရောက်လေ့လာစစ်ဆေး တိုးမြင့်သတ်မှတ်ပြီး ဒေသခံများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မောင်တောမြို့ဆိုင်းဘုတ်။ (ဓါတ်ပုံ - နိရဉ္စရာ)
မောင်တောခရိုင် လုံခြုံရေးကြောင့် ရဲစခန်းသစ်များတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်မည့် နေရာများမှာ အင်းဒင်၊ အလယ်သံကျော်၊ သရေကုန်ဘောင်နှင့် ကျီးကန်ပြင်ဒေသများအတွင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် မောင်တောမြို့ ရဲမှူးချုပ် ဦးတင်ကိုကို ဦးဆောင်ပြီး ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိများ၊ မကဖအဖွဲ့မှူးများက သွားရောက်၍ ရဲစခန်းသစ် မြေများကို သတ်မှတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းခရီးစဉ်တွင် အလယ်သံကျော် အထကကျောင်းခန်းမ၌ ရဲမှူးချုပ် ဦးတင်ကိုကိုနှင့်အဖွဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးများကို ဒေသဆိုင်ရာအကြီး အကဲများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်သူများက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ဒုချီးရားတန်းအရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျဆုံးသွားသော ရဲတပ်ကြပ်ကြီးနှင့် ၎င်းကိုင်ဆောင်ခဲ့သော လက်နက် ပျောက်ဆုံးနေရခြင်း မှုခင်းအတွက် တရားခံအား အားလုံးဝိုင်းဝန်းဖေါ်ထုတ်ကြဖို့နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ဆိုသည်။
နယ်စပ်ဒေသများ လုံခြုံရေးအတွက် ရဲစခန်းသစ်များနှင့်အတူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အနှောင့်အယှက်များ မပေးကြဖို့နှင့် တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦး အနေဖြင့် ခုခံကာကွယ်ကူညီကြဖို့ ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းရဲစခန်းသစ်များ တည်ဆောက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းဒေသအတွင်းရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် မှုခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အချိန်မီ လာရောက်တိုင်ကြားအမှုဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းဒေသခံများနှင့် နယ်စပ်လုံခြုံရေးများအတွက်ပါ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ယုံကြည်နေကြသည်။
အလယ်သံကျော် အထကကျောင်းခန်းမ၌ ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးတင်ကိုကိုနှင့်အဖွဲ့ အနေဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ နယ်မြေအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များကို အဓိကထား ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုအခါ မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် နယ်စပ်ဒေသများအတွင်း ယခင်နှစ်များကထက် နယ်စပ်လုံခြုံရေး တိုးမြင့်စောင့်ကြည့် နေကြောင်း နယ်စပ်သတင်းများက ဆိုသည်။
Posted by Than Htoon at 5:04 PM
Labels: နယ်စပ်ရေးရာ, ရခိုင်, ရဲတပ်ဖွဲ့, လုံခြုံရေး
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်းရန် ရခိုင်ပြည်တပ်မတော် မျှော်လင့်ထားကြောင်း စစ်ဦးစီးချုပ်ဆို
ရခိုင်ပြည်တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းထွန်းက ကချင်အခြေစိုက် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်းရန် မျှော်လင့်ချက်ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့က စစ်တွေ မြို့လူထုနှင့် ရခိုင်ပြည် အမျိုးသားကောင်စီ (ANC) အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားလိုက်သည်။
ရခိုင်ပြည်တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းထွန်းက ဖြေကြားနေစဉ်။
စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းထွန်းသည် ANC တွင် ဗဟိုအလုပ်မှုးဆောင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သလို ရခိုင်ပြည် တပ်မတော်၌လည်း စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဖြစ်သောကြောင့် ထိုတွေ့ဆုံပွဲတွင် မြို့ခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဝေဇံအောင် (စာရေးဆရာ - လွမ်းပြေအောင်) မှ ကချင်အခြေစိုက် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် ပေါင်းစည်းရေး သဘောထားကို မေးမြန်းရာတွင် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းထွန်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
" ပေါင်းစည်းဖို့အတွက် မျှော်လင့်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းထွက် တစ်မိတည်းသားလို့ ခံယူပြီးတော့ နာမည်ကိုတောင်မှ Arakan Army လို့ အတူတူခံယူတာဖြစ်ပါတယ်။ "
သို့သော်လည်း ရခိုင်ပြည်တပ်မတော်၌ အောက်ခြေရဲဘော်များ အချင်းချင်းကြားတွင် အတွေးအခေါ်ညီညွတ်ဖို့ လိုအပ်သေးကြောင်း စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းထွန်းကဆိုသည်။
" ကျနော်နဲ့ သူနဲ့ ပေါင်းစည်းလို့ မဖြစ်ဘူး။ ကောက်ညှင်းပေါင်းရင်တောင်မှ အချိုးအစားမညီဘူးဆိုရင် အကောင်းမဖြစ်ဘူး။ ကျနော်တို့ ကိုယ်ခံစားချက်တွေ၊ မာနတွေ၊ စွန့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတာ။ ပေါင်းဖို့ဆိုတာ အတွေးအခေါ်နဲ့ ညီညွတ်ဖို့ လိုတယ်။ ပေါင်းတယ်ဆိုတာ ဖြစ်သလို ပေါင်းလို့မရဘူး။ ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ ကျနော်ပြီးရင် ပြီးလို့မရဘူး။ " ဟု ပြောကြားသည်။
ယခင်က ပေါင်းစည်းခဲ့သော ပါတီများအနေဖြင့် လမ်းစဉ်မတူကွဲပြားမှုကြောင့် ကွဲသွားကြသည်ကို သင်ခန်းစာ ယူထားကြောင်း ဆိုသည်။
" ကျနော်တို့ အမြင်က မပေါင်းတာဟာ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ ပေါင်းဖို့ပေါင်းဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်။ ပေါင်းပြီးမှ ကွဲတာက ပြဿနာဖြစ်တယ်။ ပေါင်းပြီးရင် မကွဲစေချင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် တဖြည်းဖြည်း ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ပေါင်းကြမယ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဒါကတော့ ကျနော်ဖက်က စဉ်းစားချက်ပါ။ " ဟု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းထွန်းက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်အတွက် တပ်တည်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းသည် ယခင်က ထူထောင်ခဲ့ကြသော ပါတီများကို အားရမှု မရှိသောကြောင့်ဟု သူက ဆက်ပြောထားသည်။
ကချင်တွင် အခြေစိုက်သော ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (Arakan Army) ကို စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်က ဦးဆောင်ပြီး ထိုင်းအခြေစိုက်သော ရခိုင်ပြည်တပ်မတော် (Arakan Army) ကို စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းထွန်းက ဦးဆောင်ပြီး တချိန်က ၄င်းစစ်ဦးစီးချုပ်နှစ်ဦးမှာ အလုပ်အတူတူလက်တွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးကြသလို သူငယ်ချင်းများ လည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: AA, ANC, စစ်ရေး, ရခိုင်
ANC ခေါင်းဆောင်များရောက်ခိုက် ပေါက်တောတွင်ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ခံရဟုဆို
(ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းဇံဝေအား ဒေသခံ အမျိုးသမီးများက ကြိုဆိုနေစဉ် )
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့သို့ ANC ခေါင်းဆောင်များ ရောက်ရှိလာခိုက် အနည်းဆုံး ၄ နာရီခန့် ဖုန်းလိုင်း ပြတ်တောက်သွားသဖြင့် ဒေသခံများ၏ ဝေဖန်မူ ထွက်ပေါ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ဖေ​ဖော်​ဝါရီလ ၂၈ ရက်​​ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်​မှ ​နေ့လည်​ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်​အထိ GSM/ WCDMA ဖုန်းလိုင်းများ၊အင်​တာနက်​လိုင်းများ ပြတ်​​တောက်​မှု ဖြစ်​​ပေါ်ခဲ့သည်​ဟု ​ပေါက်​​တောမြို့မှ မိုဘိုင်းဖုန်းအင်​တာနက်​ အသုံးပြုသူများကဆိုသည်​။
“ ခုလို ရခိုင်​အမျိုးသား​ကောင်​စီက အကြီးအကဲ​တွေ​ရောက်​ရှိ​နေတဲ့အချိန်​မှာ ဖုန်းလိုင်းတွေ အကုန်​လုံးပြတ်​​တောက်​​နေခြင်းဟာ တိုက်​ဆိုင်​မှုသတ်​သတ်​မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး” ဟုပေါက်​​တောမြို့မှ ကို​ကျော်​​ကျော်​ခိုင်​ကဆိုသည်​။
ယခင်ကလည်း ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များရောက်စဉ် ပြတ်တောက်မူ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ RNDP ဥက္ကဌ ​ဒေါက်​တာ​အေးမောင် ပေါက်တော​​လာရောက်​တုန်းကလည်း ပေါက်တောတွင် ဖုန်းလိုင်း အချိန်အကြာကြီး ပြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့အတွက် ပေါက်တောလူထုကို သံသယ ပိုမို ဖြစ်စေခဲ့သည်ဟု ပေါက်တောမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ပေါက်​​တောမြို့​ပေါ်မှာ​တော့ ​တော်​ရုံတန်​ရုံနဲ့ လိုင်းပြတ်​​တောက်​မှု မရှိတတ်​ပါဘူး။ ခုလို နိုင်ငံရေးဘက်က ခေါင်းတွေရောက်တိုင်း ဖုန်းလိုင်း ပြတ်တောက်သွားတာကတော့ လူတွေအတွက် သံသယ ဖြစ်စရာပေါ့” ဟု ​သူမက ဆိုသည်​။
ယင်းဖြစ်​စဉ်​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ စစ်​​တွေမြို့၊ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ ဆက်​သွယ်​​ရေးဌာနသို့ ​မေးမြန်းခဲ့ရာ ဆက်​သွယ်​​ရေးဌာနမှ လက်​​ထောက်​အင်​ဂျင်​နီယာတစ်​ဦးက ​“ဒါမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ပြောဆိုသည်။
“ အဲဒါက​တော့ စစ်​​တွေမှာလည်း GSM/WCDMA ​တွေ မနေ့က လိုင်း​အောက်​ခဲ့ပါတယ်​။ ဒါတိုက်​ဆိုင်​တာပါ။ ​ဘာလို့ ဖုန်းလိုင်းကို ဖြတ်တောက်ရပါမလဲ။ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟု ဆိုသည်။
၎င်းပြင် စစ်တွေ ဆက်သွယ်ရေးရုံးမှ လိုင်းများကို ဖြတ်တောက်၍ မရဟု သူကဆိုပြန်သည်။
“ ဒါ ရန်​ကုန်​ MSC မှာဖြစ်​တာလို့ သိရပါတယ်​၊ကျွန်​​တော်​တို့ စစ်​​တွေက ဒါမျိုးလိုင်းဖြတ်​​တောက်​တာမရှိပါဘူး။ ရခိုင်​က မိုင်​ဘိုင်းဖုန်း​တော်​​တော်​များများဟာ ရန်​ကုန်​နဲ့ချိတ်​ထားတာပါ။ လိုင်းပြတ်​​တောက်​တာ​တော့ ခဏခဏ ကြုံတတ်​ပါတယ်” ဟု သူက ဆက်​​ဆိုသည်​။
ရခိုင်​အမျိုးသား​ကောင်​စီအဖွဲ့ဝင်​တစ်​ဦးကလည်း ယခင်​ခရီးစဉ်​များတွင်​ ယခုလို ဆက်​သွယ်​မှုပြတ်​​တောက်ခြင်း ဖြစ်​စဉ်မျိုး မရှိခဲ့​​ဖူးသေး​ကြောင်း​ပြောကြားသည်​။
​ပေါက်​​တောလူထုနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ခရီးစဉ်​တွင်​ ANC ဥက္ကဌဆရာ​တော်​အရှင်​ဦးသီဟ၊​ အ​ထွေ​ထွေအတွင်း​ရေးမှူး ဦးထွန်းဇော်နှင့်​ ရခိုင်​ပြည်​တပ်​မ​တော်​၏ စစ်​ဦးချုပ်​ ဗိုလ်​မှူးကြီးမင်းဇံ​ဝေတို့ ဦး​ဆောင် ပါလာကြသည်ဟု သိရသည်။
Posted by Than Htoon at 4:52 PM
Labels: ANC, ရခိုင်